ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: 2010
မကြာခင် ၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်ပြီး နှစ်သစ်ကို ရောက်တော့မယ်။ နှစ်ကုန်ကာနီးလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ရောက်တတ်ရာရာလေးတွေ တွေးမိတာကို တွေးမိသလို ရေးလိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်တစ်နှစ်၊ ကျနော် စင်္ကာပူကို ရောက်လာကာစက လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို အခုလို လူတိုင်းမကိုင်နိုင်ကြသေးဘူး။ အဲသည်တုန်းက လက်ကိုင်ဖုန်းကလည်း အခုခေတ်အမြင်နဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် တော်တော့်ကို ကြီးမားလေးလံတဲ့ ပစ္စည်းတခုပါပဲ။ Incoming call တွေ အတွက်ပါ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေထံ ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင် တဖက်က “ကျနော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်” ဆိုပြီး ရိုးရိုးတယ်လီဖုန်းလိုင်းကနေ ပြန်လည် ခေါ်ဆိုကြတဲ့ခေတ်ပေါ့။ အခုတော့ လက်ကိုင်ဖုန်းကလေးတွေက သေးသေးငယ်ငယ်။ အရောင်စုံ၊ အသွေးစုံ။ Incoming call က အခမဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီကြားထဲမယ် wifi တို့ 3G တို့နဲ့ဆိုရင် အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲပြီး Outgoing call တွေကိုပါ အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်သေးတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာ နည်းပညာတွေ ပေါက်ကွဲသလို အလျှင်အမြန် တိုးတက်လာတယ်။ အင်တာနက်ကို ကွန်ပြူတာတွေမှာသာမက အများသုံး အသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာပါ တိုက်ရိုက် သုံးစွဲလို့ ရလာတယ်။ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား စတဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာနက်ဟာ နယ်နိမိတ်တွေ ရောယှက်ဝေဝါးလာပြီး ဆုံမှတ်တခုကို ရှေးရှုနေသလိုပါပဲ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အဖိုးနှုန်း ချိုသာတဲ့ tablet pc တွေ ပေါ်လာတာဟာလည်း လူကြီးလူငယ် အသက်အရွယ်မရွေး ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်တာနက်ကို လွယ်လင့်တကူ သုံးစွဲနိုင်တဲ့အနေအထားကို ရောက်လာစေပါတယ်။
ဒီတော့ လာမယ့်နှစ်ထဲမှာ ကမ္ဘာတလွှား အင်တာနက်ကို သုံးစွဲသူ လူဦးရေဟာ အခုထက် အဆမတန် ပိုမိုများပြားလာဖို့ အကြောင်းရှိပါတယ်။
အင်တာနက်ကတဆင့် ပရိသတ် (သို့မဟုတ်) လူထုထံက သဘောထားစစ်တမ်း၊ တုန့်ပြန် ဝေဖန်အကြံပြုလွှာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီတည်း လျှင်လျှင်မြန်မြန် ရယူနိုင်တယ်။ အထင်ကရအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ “Donation Button” ကလေးပါ ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့ ထောက်ခံသူတွေထံက အလှူငွေတွေ၊ ရန်ပုံငွေတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကောက်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ဟာ သူ့သဘောသဘာဝအရ အခြားမီဒီယာတွေနဲ့မတူဘဲ အတော်အတန် လွတ်လပ်တဲ့ သဘာဝရှိတယ်။ အလွန်အမင်းဖိနှိပ်လွန်းတဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာတောင် အတိုင်းအတာတခုအထိ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသူတွေအဖို့ မိမိရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲနိုင်တဲ့ လက်နက်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းပညာမျိုးကို ရှေးရိုးစွဲ လူကြီးတွေက သုံးစွဲဖို့ တွန့်ဆုတ်နေရင်တောင် လူငယ်တွေက ဦးဆောင်ပြီး သုံးစွဲလာကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်လာမယ့် နှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျနော်မျှော်မှန်းမိတဲ့၊ တောင့်တမိတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့...
(၁) တာရှည်ခံမယ့် ဘက်ထရီ တွေ၊
(၂) စက္ကူလိုပါးလွှာပြီး ကွေးညွှတ်လို့ရတဲ့၊ ပါဝါသိပ်မစားတဲ့ Display တွေ ( နမူနာ ပုံစံ တခုနှစ်ခု ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စီးပွားဖြစ် အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နိုင်တာမျိုး)
(၃) Fusion Power (နည်းနည်း လောဘကြီးသွားသလားတော့မသိ)
(၄) နေရာအနှံ့ အလကားသုံးစွဲလို့ရတဲ့ အင်တာနက် (ဟိုတနေ့က သတင်းတပုဒ်ထဲမှာတော့ ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်နေကြတာ တွေ့ရတာပဲ)
(၅) အလိုအလျောက် မီးပူတိုက်စက်
ဒါက နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးမိ၊ မျှော်မှန်းမိတာတွေပါ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ မြန်မာပြည်က တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကရော။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပလို့ ပြီးသွားပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် ပါလီမန်ထဲကနေ နိုင်ငံရေးအဝန်းအဝိုင်းကို ချဲ့ထွင်မယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ဗန်းနဲ့လှည့်ရောင်းခဲ့သူတွေလည်း သူတို့ရဲ့ မှန်းဆထင်မြင်ချက်တွေဟာ ပါစင်အောင် လွဲမှားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးသိက္ခာတွေလည်း ကုန်းကောက်စရာမကျန်အောင် ကျဆင်းခဲ့ကြတာကို အားရစဖွယ် တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ အခု တိုင်းပြည်ထဲမှာ အကျယ်လောင်ဆုံးအသံကတော့ ၂၁ရာစုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပင်လုံညီလာခံ ကိစ္စပါပဲ။ နယ်စပ်မှာတော့ အရင်က အပစ်အခတ်ရပ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ နအဖ စစ်တပ်အကြားမှာ တင်းမာမှုတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ မြို့နယ်စည်း၊ တိုင်းစည်း အောက်ခြေကစလို့ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်လည် ခိုင်ခန့်အောင် ထူထောင်မယ်။ လူထုကို နိုင်ငံရေးအရ ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးမယ်ဆိုရင် နအဖကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး စားပွဲကို ရောက်လာအောင် ဖိအားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေဒီယိုတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ တချို့ကို နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးသူအများဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံခြုံရေးကိစ္စကို ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပြောကြပြီး ရေဒီယိုပေါ်က တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေးကဆိုရင် “ညီမလေး အရဲမကိုးပါနဲ့နော်” ဆိုပြီး တိုက်တွန်းသတိပေးထားတာကိုတောင် ကြားလိုက်ရပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို နားလည်ပေမယ့် တဖက်မှာ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ သွားသင့်တဲ့ကိစ္စ၊ လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရား ရှိနေတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေတို့လို အရဲမကိုးဘဲ လှိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ ပုန်းနေပြီး တကယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုတော့ လုံးဝ လိုချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လို ရဲဝံ့စွန့်စားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို မဆုတ်မနစ်လုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်မျိုးကိုသာ ပိုပြီး မြင်လိုကြမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်း တလျှောက်လုံး မိမိအသက်ကိုတောင် ပဓာနမထားဘဲ ရဲဝံ့စွန့်စားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သာ ဒီလို ပြည်သူအများက ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ အနေအထား ရောက်ရှိလာခဲ့တာ မဟုတ်ပါလား။ အရဲမကိုးတဲ့ လူလိမ္မာ၊ လူနပ်တွေချည်းသာ များလာရင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ကြမယ့် လူတွေ နည်းပါးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ ပြည်တွင်းက အချို့သော စာနယ်ဇင်းတွေ၊ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ရသမျှ အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး စွန့်စွန့်စားစား ကြိုးပမ်းကြတဲ့ အနေအထားကို သတိပြုမိပါတယ်။ အချို့သော အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း စစ်အစိုးရဲ့ မျက်မာန်ရှမှု၊ ငြိုငြင်မှုကို ခံယူပြီး မိမိတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို တမျိုးတဖုံ ထုတ်ဖော်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မကြာမီအနာဂတ်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်မျှော်မှန်းမိတဲ့၊ တောင့်တမိတဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကတော့....
(၁) နည်းပညာတိုးတက်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သတင်းလွတ်လပ်မှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါစေ။
(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ညီညွတ်စွာ ပေါင်းစည်းနိုင်ကြစေ။
(၃) ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အပါအဝင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ကြစေ။
(၄) လူထုတရပ်လုံးပါဝင်မှုနဲ့ စစ်အစိုးရကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာအောင် ဖိအားပေးနိုင်ကြစေ။
ဒါကတော့ လတ်တလော တွေးဖြစ်တဲ့အတွေးတွေ၊ ဆန္ဒတွေပါ။
ဘလော့ဂ်ကို လာလည်သူအပေါင်း ကျန်းမာကြပါစေ။ ပျော်ရွှင်သော ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်နဲ့ ကောင်းသောနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျား။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, December 18, 2010
Labels: political post, Thoughts Comments: (26)
ကျေးဇူးတင်သူများ၊ Ballroom Protest နဲ့ သစ်ခွပန်းကဗျာ
(၁) “ကျေးဇူးတင်တယ်” ဆိုတဲ့စကားဟာ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ မတွဲဖက်ရင်၊ အထူးသဖြင့် မရိုးသားတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ တွဲဖက်နေရင် ကြည်နူးစရာ ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အပြင် အလွန်တရာ အော့နှလုံးနာစရာ၊ စက်ဆုပ်စရာကောင်းပုံကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အခုလို သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတည်းက ပြည်သူတွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖိအားပေးပြီး မဲထည့်ခိုင်းတယ်။ ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး၊ အခွင့်အရေးဗန်းပြပြီး မဲဝယ်တယ်။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မဲခိုးတယ်။ မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ ကြိုတင်မဲဆိုတာတွေ ပေါင်းထည့်ပြီး မဲလိမ်တယ်။ မဲရလဒ်တွေ ကြေညာတဲ့အချိန်မှာလည်း ညစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင် ညစ်သလဲဆိုတော့ “ရာခိုင်နှုန်း ၁၀၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံတယ်လို့ ကြေညာမိတာမျိုး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတဲ့ ပယ်ဖျက်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပါ ကြံဖွံ့အမတ်လောင်းတွေနိုင်တယ်လို့ ကြေညာမိတာမျိုး”.... စသဖြင့် ရာဇဝင်မှာ တခါမှ မကြုံဖူးလောက်အောင် အရှက်နည်းစွာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညစ်ပတ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဟော... အခုကျတော့ တခဲနက်ထောက်ခံ ဆန္ဒပြုရွေးချယ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုကြီးကို အထူးကျေးဇူးဥပကာယတင်ရှိပါသတဲ့။ ဖွမ်...ရွံစရာကောင်းလိုက်တာ။ ကြံ့ဖွံ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ထင်ရှားအောင် ဥပမာပေးရရင်... လက်ဝတ်လက်စားတွေကို ဓားနဲ့ ထောက် လုယက်ပြီးတော့မှ အခုလို လက်ဝတ်ရတနာတွေ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ ဓားပြရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ တထေရာတည်း တူနေပါတယ်။
(၂) ဒီကာတွန်းကတော့ စင်္ကာပူက လောလောလတ်လတ် ဟာသ တခုပေါ့။ ဒီဟာသကို ရယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကာတွန်းအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ခ်တွေကို အရင်သွားဖတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
Stage protests in ballrooms? Really? , “Court reserves judgement on appeal by3SDP members”
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတာကို တကမ္ဘာလုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ ဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုကြပေမယ့် စင်္ကာပူက ခေါင်းဆောင်များကတော့ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေခဲ့ကြတာ အံ့သြစရာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စထရိတ်တိုင်းမ်စ်သတင်းစာက လာရောက်မေးမြန်းတဲ့အခါ မြန်မာအတိုက်အခံအဖွဲ့တွေနဲ့ပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ စင်္ကာပူအစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူအစိုးရကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ကမ္ဘာတဝှမ်းက လေးစားခြင်းခံရသူကိုသာ မဆက်ဆံဘဲ နေချင်နေမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်လို နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကျော် သစ်ခွပန်းဥယျာဉ်ထဲက သစ်ခွပန်းတမျိုးကိုတောင် သိန်းစိန်နာမည်နဲ့ တခုတ်တရ ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်တောင် အောက်ပါအတိုင်း ကဗျာလေးတပုဒ် စပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
No less thanabelle asametaphor,
Innocent in nature
Pity that unfortunate orchid in Singapore,
Named afterakiller.
But the killer has no name
In heaven’s short-list
And there is no shame
In those who named the orchid.
Posted by ကိုပေါ on Monday, December 6, 2010
Labels: in the news Comments: (19)
ခင်ညွန့် (လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်)။.............။ “ကျနော့်မှာ အခု ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်နေရတာ..”
အသံတိတ်ဗီဒီယိုမှာတုန်းက အဲဒီလို ပြောနေတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာ.... မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့။
အသံထွက် လင့်ခ်ကို ကြည့်ရှုရန်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, December 5, 2010
ဒါကတော့ The Online Citizen က ရိုက်ပြီး ရောင်းနေတဲ့ တီရှပ်တွေပါ။ (ရံပုံငွေတခုခုအတွက် ရိုက်ရောင်းတယ်လို့ ယူဆရတာပဲ။) ဆောင်းပါးကိုတော့ ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးရဲ့ အောက်ခြေမှာ ကွန်မန့်လုပ်သူတယောက်က တီရှပ်ဒီဇိုင်းကို အခြားစာသားတခုနဲ့ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖို့အတွက် အကြံပေးထားတာ တွေ့ရလို့ ရယ်ရပါသေးတယ်။ သူအကြံပြုတဲ့ စာသားက….
“တကယ်လို့ ငါပျောက်နေတယ်ဆိုရင် ငါ့အစ်ကိုရဲ့ အိမ်မှာ ငါရှိနေမယ်”…..တဲ့။
ဒီစာသားကတော့ စင်္ကာပူမှာ အခုတလော လူပြောများနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တခုပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က မက်စ်ဆီလာမက် အမည်ရ အကြမ်းဖက်သမားလို့ သံသယအဖြစ်ခံရသူတယောက်ဟာ စင်္ကာပူရဲ့ အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအကျဉ်းစခန်းကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စင်္ကာပူက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကျွန်းအနှံ့၊ တောအနှံ့တောင်အနှံ့၊ ဘီးစိတ်တိုက် မြေလှန်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ မလေးရှားဖက်ကို ထွက်တဲ့ နယ်ခြားဂိတ်တွေမှာဆိုရင် ဖြတ်သမျှ ကားတိုင်းကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးရတဲ့အတွက် သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ကားတွေ တန်းစီ ပိတ်ဆို့ကုန်ပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေလည်း ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူအာဏာပိုင်တွေ တိုက်တဲ့ ဘီးစိတ်က ဘီးဆံတချောင်း ကျိုးနေပုံရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲသည်လိုဘီးစိတ်တိုက်ရှာဖွေနေကြချိန်မှာ ဆီလာမက်ဟာ စင်္ကာပူက သူ့အစ်ကိုရဲ့ အိမ်မှာ ညအိပ်ညနေ ပုန်းအောင်းနေခဲ့ပါသတဲ့။ စင်္ကာပူအစိုးရက သူတို့ရဲ့ (အဲဒီအချိန်က) အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသေးစိတ် မထုတ်ပြန်တဲ့အတွက် မည်သို့မည်ပုံ မျက်စိမှောက်သွားကြသလဲဆိုတာကို ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အတိအကျ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေကတော့ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဒီလောက် ငွေအားလူအား အကုန်အကျခံ ရှာဖွေခဲ့ပြီး တကယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့် နေရာကိုကျမှ သေသေချာချာ မရှာဖွေ၊ မစစ်ဆေးရကောင်းလားလို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို အပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ စောစောက တီရှပ်စာသားကို အကြံပေးသူလိုပဲ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့အစိုးရကို သရော်ချင်တဲ့သူတွေလည်း တပုံတပင်ပေါ့။
ဒါမျိုးကျတော့ မြန်မာပြည်က ရဲချုပ်ခင်ရီတို့က တော်သွားပြန်ပါလေရော။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ရဲချုပ်ခင်ရီတို့ တော်ပုံက ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဗုံးတလုံးပေါက်တယ်ဆိုရင် နောက်တနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဖွဲ့လက်ချက်ဆိုတာ (မှန်တာ၊ မမှန်တာ နောက်ထားလို့) တခါတည်း ရမ်းသန်း လက်ညိုးထိုးလိုက်တာပါပဲ။ အကြားအမြင်ရနေသလားတောင် ထင်ရတယ်။ တော်ရှာပါတယ် တော်ရေ့...တော်ရှာပါတယ်အေ့...လို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်။
ဆီလာမက်ကို လက်ခံထားပြီး လွတ်မြောက်အောင် ကူညီတဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေကို စင်္ကာပူအစိုးရက (တံခါးပိတ်) တရားရုံးတင်ပြီး ထောင်ဒဏ်တွေ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်္ကာပူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ထောက်ပြထားတဲ့အချက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဆီလာမက်ကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အိုင်အက်စ်အေလို့ခေါ်တဲ့ အက်ဥပဒေက မြန်မာလို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုရရင်တော့ “နိုင်ငံတော်ကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ကျန် အက်ဥပဒေ တခုပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုကြီးအပြီးမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းဖို့ နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ကိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အက်ဥပဒေပေါ့။
ဒီဥပဒေရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်က သံသယအဖြစ်ခံရသူ၊ အစွပ်စွဲခံရသူကို ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ဘာတခုမှ တင်ပြစရာမလိုဘဲ၊ တရားခွင်မှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းလည်း မလိုအပ်ဘဲ “အစိုးရအဖွဲ့ဝင်(ပြည်ထဲရေး)ဝန်ကြီး” ရဲ့ အခွင့်အာဏာနဲ့တင် နှစ်ရှည်လများ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အချက်ပါပဲ။
အခုလည်း ဆီလာမက်ကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ သင်္ကာမကင်းခံရသူ ဆိုတာ စင်္ကာပူအာဏာပိုင်များရဲ့ အပြောကို ကျနော်တို့က တဖက်သတ် ယုံကြည်လိုက်ရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုဟာ မှန်ချင်မှလည်း မှန်ပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ကို ယုံကြည်လောက်စရာ သက်သေသက္ကာယနဲ့ တရားရုံးမှာ လူသိရှင်ကြား တရားစွဲဆိုပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ စီရင်ချက်ချထားတာမျိုးမှ မရှိသေးဘဲကိုး။
တကယ်လို့ ဆီလာမက်မှာသာ တကယ်အပြစ်မရှိဘဲ သက်သက် မှားယွင်းအဖမ်းခံထားရတာဆိုရင် လူတယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ မနစ်နာပေဘူးလား။ သူ့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးမနေဘူးလား။ (စင်္ကာပူအစိုးရဟာ အရင်ကလည်း အပြစ်မရှိတဲ့ လူတွေကို ကွန်မြူနစ်တွေဆိုပြီး အထောက်အထားမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိုင်အက်စ်အေကို အသုံးပြုပြီး အကျဉ်းချ ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။)
နောက်တချက်က ဆီလာမက်ကို လက်ခံထားတဲ့ ဆွေမျိုးတွေဖက်က ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ဆီလာမက်ဟာ တရားရုံးတော်ကနေ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ အမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ တရားခံတစ်ယောက်မဟုတ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကူညီကြတဲ့ကိစ္စမှာ သူတို့ကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ စဉ်းစားသုံးသပ်စရာပါ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားလို့ အစွပ်စွဲခံရသူတွေကို တရားရုံးထုတ်ပြီး လူသိရှင်ကြား စစ်ဆေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစွပ်စွဲခံရသူတွေအနေနဲ့ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ငှားပြီး ဥပဒေကြောင်းလမ်းအရ ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
ဒါကတော့ စင်္ကာပူမှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ဖတ်မိသမျှကို ခြုံငုံပြီး မြန်မာဘာသာနဲ့ မျှဝေလိုက်တာပါ။ မူရင်းကို ဖတ်လိုခဲ့ရင် အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ သွားဖတ်ပါရန်။
ပူးတွဲ ဖတ်ရှုရန်။.............။ A case crying out for transparency and justice
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, December 1, 2010
Labels: in the news Comments: (12)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အမှန်တကယ် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တယ်၊ စုစည်းညီညွတ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ် ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ သူမလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက် သူမရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အလျောက် အမှန်တကယ် စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ ကူညီလိုသူများ၊ ထောက်ပံ့လိုသူများလည်း ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါ တဖွဲဖွဲပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်အားစုအားလုံးနဲ့ ညီညွတ်ရေးလုပ်မယ်ပြောတဲ့အတွက် “ညီညွတ်ရေး”ဆိုတဲ့ စကားကို အကြောင်းပြုပြီး တချို့သောသူတွေ တစခန်း ထလာတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကလေးအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို လုံးလုံးပစ်ပယ်ပြီး (ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မှုဟာ လက်တွေ့မဆန်ဘူးလို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး) ရွေးကောက်ပွဲကို အားတက်သရော ထောက်ခံခဲ့သူတွေဟာ အခုကျတော့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ စာတွေ ရေးသူကရေး၊ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး အဖွဲ့ချုပ်အနားကို ယောင်လို့တောင် အနားမသီခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း အခုကျမှ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေကို သင်တန်းပေးလိုသူနဲ့၊ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးလိုသူနဲ့၊ လုံခြုံရေးအကြံပေးလိုသူနဲ့ စသဖြင့် စသဖြင့် အကူအညီပေးလိုသူတွေ အလျှိုလျှိုပေါ်ထွက်ပေါ်လာပြီး အင်မတီးအင်မတန် အလုပ်များနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီအကူအညီမျိုးတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ် အချိန်တွေကတည်းက အဖွဲ့ချုပ်ကို ပေးလိုက ပေးနိုင်ခဲ့ပါလျက် ဘာကြောင့် မပေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ "A friend in need isafriend indeed" - လိုအပ်နေတုန်းမှာ ကူညီတာကမှ တကယ့်မိတ်ဆွေစစ် - ဆိုတဲ့ စကားပုံကိုသာ ပြေးမြင်မိပါတော့တယ်။။ အခုကျမှ ပေါ်ပြူလာဖြစ်မယ့်အရာတွေကို ထလုပ်တာဟာ “အခွင့်အရေးလိုချင်လို့လား၊ နာမည်ကောင်းလိုချင်လို့လား၊ အမှန်တကယ် စိတ်စေတနာရှိလို့လား” စသဖြင့် သို့လော သို့လော တွေးတောမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်မတန်ပါးနပ်သူ၊ လူကဲခတ်ကောင်းသူတဦးဖြစ်တဲ့အလျောက် အနားကို ကပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေထဲကမှ အစစ်အမှန်နဲ့ အတုအယောင် အပေါ်ယံသမားတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲခြားစိစစ် ရွေးထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေပြီးသားမို့ စိတ်ပူစရာတော့ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ညီညွတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တခုခုကို ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာ “စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်၊ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်” ဆိုတဲ့ လိုအပ်ချက်၊ ကန့်သတ်ချက်(Condition)လေးတွေကို မမေ့မလျော့ ထည့်ထည့်ပြောတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတလောမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တခါက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ “ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ စားဖားကြီးတွေ ညီညွတ်ရေးမျိုးကို မလိုချင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရနေမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, November 20, 2010
Labels: political post Comments: (68)
သို့.... စာဖတ်သူ မိဘပြည်သူများခင်ဗျား။
မကြာမီက မိမိတို့ “သဘောက်”ဂျာနယ်မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော ခန့်မှန်းဟောကိန်းထုတ်မှုများသည် ယခုအခါ မမှန်ကန်ကြောင်း ထင်ရှားလာသောကြောင့် မိမိတို့ အနေဖြင့် စာဖတ်သူ ပြည်သူများအား မျက်နှာအောက်ချ၍ ရိုကျိုးစွာ တောင်းပန်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစားရပါသည်။ မိမိတို့၏ ခန့်မှန်း ရေးသားခဲ့မှုများ မှားယွင်း သွားသည့်တိုင် မိမိတို့ အနေဖြင့် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် ထားရှိသော စေတနာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကိုမူ ကျိန်ဆို၍ ပြောကြားလိုပါသည်။ ဘုရားစူး၊ မိုးကြိုးပွတ်၊ ကာလနာတိုက်၊ ချီးကားတိုက်။
မိမိတို့၏ ဟောကိန်းထုတ်မှုများသည် ၁၀၂.၀၉ ရာနှုန်းပြည့် ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှု ရှိပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် ထားရှိသော စေတနာ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မည်သည့် Stakeholder တစ်ဖက်ဖက်ကိုမျှ နိမ့်ပါးစေလိုသော ဆန္ဒမရှိဘဲ ဘက်ပေါင်းစုံ Win-Win-Win-Win..............Win-Win အလို့ငှာသာ ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မိမိတို့၏ ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ မှားယွင်းခဲ့ကြောင်းကိုမူ စာဖတ်သူများသို့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလိုပါသည်။ မိမိတို့ ၏ စေတနာအမှားသာလျှင်ဖြစ်၍ စာဖတ်သူများအား မျှော်လင့်ချက်အမှား ပေးရာ ရောက်ခဲ့လျှင်လည်း မိမိတို့၏ အနူးအညွတ် တောင်းပန်မှုကို လက်ခံ၍ စာဖတ်သူများက ခွင့်လွှတ် ပေးကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ သနားခွင့်လွှတ်ပြီးသကာလ မိမိတို့ “သဘောက်”ဂျာနယ်ကို ဝယ်ဖတ်မြဲ ဝယ်ဖတ်မည်ဟု မိမိတို့ မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ ဆက်လက် အားပေးကြပါဦးနော်။
မိမိတို့ အနေဖြင့်မူ မိမိတို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံနှင့် လူမျိုး အတွက် မလျှော့သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် ရိုးသားသောအမှားများကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ အဖန်တလဲလဲ ကျူးလွန်နေဦးမည်သာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အောက်ပါ သီချင်းလေးအတိုင်း စာဖတ်သူများသို့ တပါတည်း အသိပေး လိုက်ပါသည်။
“အရင်လို ဘဝအစမှာ.... ပြန်ပြီးနေခွင့်ရတောင်....
အပြန်တရာ မိုက်ဦးမှာ၊ အဖန်တရာ မှားဦးမှာ.....
အလွန်တရာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော သဘောက်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, November 18, 2010
Labels: in the news Comments: (44)
လူနဲ့ခွေး ၊ ခွေးနဲ့လူ
လူသည် ခွေးကို မကိုက်
ခွေးသာ လူကို ကိုက်သည်။
လူမှန်လျှင် ခွေးနှင့် ဖက်မကိုက်ရာ။
လူဖြစ်လျက် ခွေးနှင့် ဖက်ကိုက်သည်ဆိုအံ့…။
အခန့်မသင့်လျှင် လူသာ ဒဏ်ရာရပေလိမ့်မည်။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, November 17, 2010
Labels: general Comments: (36)
"Those who do not remember their past are condemned to repeat their mistakes."
“အတိတ်ကနေ သင်ခန်းစာ မယူတတ်သူတွေဟာ အမှားတွေကို ထပ်ဖန်တလဲလဲ လုပ်မိဖို့ ကျိန်စာသင့်နေကြသူတွေသာ ဖြစ်တယ်”
ရာစုနှစ်တခု၊ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ဆိုတာ သမိုင်းအမြင်နဲ့ကြည့်ရင် တကယ်တော့ ဝေးလံလှတဲ့ အတိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့တတွေ အမှတ်သညာ မနည်းဘူးဆိုရင်၊ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ မနေခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ သမိုင်းကို လေ့လာတီးခေါက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သတိရသင့်တဲ့ အတိတ်က အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တရာခန့်က မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာ ကျရောက်နေစဉ် ကာလအပိုင်းအခြားကို ပြန်လည် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အဲဒီအချိန်က မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ စသဖြင့်လာရောက် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံကြတာကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ ထင်ရှားပြီး လူသိများတဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ကို ထုတ်နှုတ်ပြရရင် ဘုံဘေဘားမား၊ စတီးလ်ဘရားသား စတဲ့ သစ်ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဘီအိုစီ ရေနံကုမ္ပဏီ၊ ဧရာဝတီဖလော်တီလာ သင်္ဘောကုမ္ပဏီ၊ ရိုးလ်ကုမ္ပဏီစတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ အစရှိသဖြင့်။ နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်းသစ်၊ ရေနံ၊ ဆန်စပါးတွေ ထွက်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှက အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံနိုင်ငံတွေထဲမှာ အဖွံ့ဖြိုးအတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံလို့လည်း လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တဖက်မှာ ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းက မြင့်တက်မနေခဲ့ပါဘူး။ ဘီအိုစီ ရေနံကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဆိုရင် ရေနံဆီမီးခွက်တောင် မထွန်းနိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲကြလို့ ဖောင်စီးရင်းရေငတ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းကြပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း လယ်သမားတွေဟာ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ချစ်တီးတွေရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအောက်မှာ နလန်မထူနိုင်အောင် ခံကြရပါတယ်။ ဒီလို ဖိနှိပ်မှု ကြပ်တည်းမှုတွေကို မခံနိုင်လို့ ရေနံမြေသပိတ်၊ ၁၃၀၀ ရာပြည့်အရေးတော်ပုံ စတဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာပါ။
ဒီတော့.... နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုရှိပေမယ့် တိုင်းသူပြည်သား အများစုအနေနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် မဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါ၊ လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အခါ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို မရတဲ့အခါ ဓနရှင်လူတန်းစားတွေ၊ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှု၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကို ပြည်သူတွေ ကျောကော့အောင် ခံစားတတ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ သာဓက အထင်အရှားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ အဲဒီခေတ်က မြန်မာတမျိုးသားလုံးဟာ ကိုယ်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်အောင်၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်အောင် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူခဲ့ကြရတာ မဟုတ်ပါလား။
ဒါတောင်မှ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကို သိမီတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရေးသားတဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွေ၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း၊ ဝတ္ထုရုပ်ရှင်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာ နယ်ချဲ့အစိုးရဆိုပေမယ့်လည်း တရားလက်လွတ် စိတ်ထင်တိုင်း ရမ်းကားအုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်။ သူ့ခေတ်ကာလအလျောက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိတယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အတန်အသင့်ရှိတယ်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ သတင်းသမဂ္ဂတွေ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့ခွင့်ရှိတယ်။ လမ်းပန်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ အထိုက်အလျောက် ဘဏ္ဍာငွေကြေးတွေ ချထားသုံးစွဲပေးတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ပုဂ္ဂလိက သစ်ကုမ္ပဏီတွေအတွက် သစ်ခုတ်လှဲတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီစိတ်တိုင်းကျ အရည်အသွေးကောင်း သစ်တွေကိုချည်း မခုတ်လှဲအောင်၊ သစ်တောမပြုန်းတီးအောင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သစ်တောအရာရှိတွေ ခန့်ထားပြီး သစ်တောဥပဒေတွေ၊ စည်းကမ်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ ခုတ်လှဲစေခဲ့တာကို သတိပြုမိပါတယ်။
ဒီကနေ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျရောက်စဉ်အချိန်ကထက်ကို အဆမတန် ဆိုးရွားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုလည်း မရှိဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ အရံအတားတွေ မရှိဘူး။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်နေတယ်။
နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလို စည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့ စနစ်တကျ အုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ ဥပမာ...သစ်ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် ရှိသမျှ သစ်မာတွေကို မဆင်မခြင် ခုတ်လှဲပြီး ပြည်ပကို တင်ပို့ကြလို့ တောပြုန်းသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ အလားတူ ရေနံနဲ့ ကျောက်မျက်သယံဇာတတွေကိုလည်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေက တံခါးမရှိဓါးမရှိ ထုတ်ယူကြလို့ ကုန်သလောက် နီးတော့မယ်။ ဒီလို သယံဇာတ ရင်းမြစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလို့ ပြည်သူတွေမှာ အကျိုးရှိသလားဆိုတော့ လုံးဝ အကျိုးခံစားရခြင်း မရှိပါဘူး။ ရောင်းရငွေတွေဟာ စစ်အစိုးရ အိပ်ကပ်ထဲကိုသာ ဝင်ပြီး ပြည်သူတို့အတွက် သုံးစွဲရမယ့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအတွက် ဘတ်ဂျက်မှာ အင်မတန်မှ နည်းပါးလှတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားကိုသာ မသဒ္ဓါရေစာလို ချပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၂ နှစ်အတွင်းမှာ လုံးဝဥဿုံ ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရတာကို အားလုံး မျက်မြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကာလအတောအတွင်း အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေမှာ ပြည်ပရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကြောင့် အပြိုင်အဆိုင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကြတာကို မြင်တွေ့ကြရတဲ့အခါ အချို့သော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေသာရှိရင် သူများနိုင်ငံတွေနည်းတူ တိုးတက်လာနိုင်ကောင်းရဲ့လို့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေ စတင် မက်လာကြပုံရပါတယ်။။ အဲဒီမှာ စစ်အစိုးရဖက်ကနေ ပင်းပြီး ဆွယ်ပေးရတဲ့ ပညာရှင်ဆိုသူတွေကလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်လာကြတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပါ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ရှားရှားပါးပါး ဥပမာတခုဖြစ်တဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံ ဥပမာကို တွင်တွင်ကြီး ပေးလာကြပါတယ်။ သူတို့အဆိုအရ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေ ရှိလာရင်ပဲ တိုင်းပြည်ဟာ နေ့ချင်းညချင်း ကြီးပွားပြီး လူလတ်တန်းစားဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာမယ်။ အခြေခံ စားဝတ်နေရေး ခိုင်မာလာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်မှုကိုလည်း လူတွေဟာ တောင့်တလာကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအဆိုဟာ နေရာတိုင်းအတွက် မှန်ပါ့မလားဆိုတာကို အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက် မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားမိပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့မှာပဲ နိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်တော့ သူက..... “ဘယ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကမှ စွန့်စားပြီး မမြှုတ်နှံချင်ဘူး။ မင်းတို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုး။ ခဏနေ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပိတ်မပစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံနိုင်သလဲ။ သူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရရင် တရားဥပဒေအရ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းခွင့်ရမယ်လို့ ဘယ်သူအာမခံရဲသလဲ။ မင်းတို့နိုင်ငံမှာ သွားရောက် မြှုတ်နှံမယ့် ကုမ္ပဏီတွေက မင်းတို့ ဒေသခံတွေ အလုပ်ရရှိရေးတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ပပျောက်ရေးတွေကို ဘာတခုမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ အဓိက က အမြတ်အစွန်းရဖို့ပဲ။ အေး... ရေနံတို့၊ ကျောက်စိမ်းတို့လို သေချာပေါက် အမြတ်အစွန်းရမယ့် လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ မြှုတ်နှံမှာ အသေအချာပဲ”.........တဲ့။ သူပြောတာကလည်း မငြင်းနိုင်လောက်အောင် မှန်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိ။ အာဏာပိုင်တွေကိုယ်၌က အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုလုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ နအဖ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စလုပ်ကာစက စင်္ကာပူကနေ သွားပြီး သန်းနဲ့ချီ မြှုတ်နှံခဲ့သူတွေ အကွဲကြီး ကွဲခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓက ရှိပါတယ်။
နောက်တချက်က ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးခင်၊ တိုင်းသူပြည်သား အလုပ်သမားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ အသင့်မဖြစ်သေးခင်၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်မရှိသေးခင်မှာ ပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်ပေးရင်လည်း လူတွေရဲ့ လုပ်အားကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို လာရောက် အဆီအနှစ်စုတ်ယူခံရတာပဲ အဖတ်တင်လိမ့်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ရှိသမျှကို တတိတိနဲ့ ထုခွဲရောင်းချတဲ့နည်းဆိုရင်တော့ ပညာမတတ်တဲ့ ကုဋေကြွယ်သူဌေးသားရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်ပေါက်နဲ့ အတူတူပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ခွက်လက်ဆွဲကာ တောင်းစားရမယ့်ကိန်းပဲလို့ မစဉ်းစားဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။
ကျနော့်တဦးတည်းသဘောအရကတော့ Targeted Sanctions လို့ ခေါ်တဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဦးတည်ပိတ်ဆို့တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမျိုးတွေကို အထူး သဘောကျပါတယ်။ ဥပမာ.... နအဖ လက်ဝေခံ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တဲ့ နအဖ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် တားမြစ်ပိတ်ဆို့မှုမျိုးတွေ၊ စစ်အစိုးရနဲ့ လက်နက်အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ မသမာတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူထားတဲ့ ငွေမဲတွေကို တခြား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ သွားရောက်အပ်နှံတဲ့အခါ လက်ခံထားတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ နအဖ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်ဝေခံတွေကို ဗီဇာပိတ်ပင်မှုမျိုးတွေ၊ သယံဇာတတွေကို ထုတ်ယူမယ့် လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဟန့်တားပိတ်ဆို့မှုမျိုးတွေကို အထူး သဘောကျပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တချို့ပြောကြတာရှိတယ်။ ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုက နအဖ ရဲ့ ထောက်ကွက်ကြီးတခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး။ ကျနော်စဉ်းစားလို့မရတာက နအဖ ထောက်ပြတာကို ဘာကြောင့် အရေးတယူလုပ်ပြီး ဂရုစိုက်နေကြသလဲ။ နအဖက ပြည်သူလူထုရဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရမှ မဟုတ်တာဘဲ။ နအဖ ထောက်ကွက်ကြီး ဖြစ်လည်း ဂရုစိုက်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဂရုစိုက်ချင်ရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ အာဏာလွှဲအပ်ခြင်းခံရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသံကိုပဲ ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသံကသာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နအဖက ပြည်သူလူထု အသံကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့အသံကို နားထောင်တဲ့၊ ပြည်သူလူထုက အာဏာနှင်းအပ်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကိုသာ ကျနော်တို့ အလေးမူသင့်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
နောက်တချက်က တိုင်းပြည်စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျရတာဟာ နအဖရဲ့ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်၊ နအဖရဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ နအဖရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားတွေကြောင့်ဆိုတာ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ဒီလောက် ရှင်းလင်းနေပါလျက်နဲ့ “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ချွတ်ခြုံကျရတာပါ”ဆိုတဲ့ နအဖရဲ့ ဝါဒဖြန့်စကားကို ယုံစားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဦးနှောက်မသုံးရာကျပြီး နအဖ နောက်လိုက် ဖြစ်မှန်းမသိလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို စီးပွာရေးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာက မြောက်ကိုရီးယားကို တကမ္ဘာလုံးက ပိတ်ဆို့သလို ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုသော်ငြားလည်း အိမ်နီးချင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အိန္ဒိယတို့ တရုတ်တို့က ဘယ်တုန်းကမှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့လည်း မတိုးတက်ဘူးဆိုတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မတိုးတက်တာ မဟုတ်၊ နအဖ အသုံးမကျလို့သာ မတိုးတက်တာဖြစ်ကြောင်း ဦးပုညစကားနဲ့ပြောရရင် “ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မုန့်တီဟင်းလို” ရှင်းရှင်းကြီး မြင်နေရတာပါပဲ။ ဒီကြားထဲမှာ ကျနော်တို့အချစ်တော် နအဖ စစ်အစိုးရက စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို နယ်ခြားဂိတ်ကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု တန်ပြန်လုပ်လိုက်ချင်ပါသေးသဗျား။
ဒါတွေကတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တွေးမိသမျှ ကျနော့်အမြင်ပါ။ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
(ခေါင်းစဉ်ကို ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ စုံထောက်ဝတ္ထုတပုဒ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ယူသုံးထားပါတယ်။)
ရေးသူ - ကိုပေါ။
(၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀)
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, November 16, 2010
Labels: political post Comments: (39)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူလူထု အသံကို နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတော့... ကျနော်လည်း ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ကျနော့်ဉာဏ်လေးရှိသလောက် ခြစ်ခြုတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးသကာလ ကျနော့်အသံလေးကို အခုလို ထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားပါစေသတည်း....း-)
(၁) ထောင်သောင်းချီတဲ့ လူစုလူဝေးကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါ အားလုံး ကြားနိုင်ဖို့အတွက် အသံချဲ့စက်ကောင်းကောင်းတွေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ လိုအပ်နေပါတယ်။ မိန့်ခွန်းတွေကို အသံဖမ်းတဲ့အခါ ကြည်ကြည်လင်လင် ကြားရအောင် မိုက်ကရိုဖုန်းက အသံကို တိုက်ရိုက် ဖမ်းယူထားတာမျိုး လည်း (ပါတီဝင်တွေကိုယ်တိုင်က တာဝန်ယူပြီး) လုပ်သင့်ပါတယ်။
(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေ၊ အသိပေးချက်တွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပကို အလျှင်အမြန် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မယ့် တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ (official webpage) တခု လိုအပ်နေပါတယ်။ မိန့်ခွန်းတွေကိုလည်း အဆိုပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အများပြည်သူ အလွယ်တကူ နားထောင် ကိုးကားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
(၃) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ပါတီပိုင် ဓါတ်ပုံဆရာ ကောင်းကောင်းတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ (ကိုကျော်သူ ပန်းချီကား လှူနေတဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ရတုန်းက မှုန်ဝါးနေတဲ့အတွက် ကျနော်များ မျက်မှန်မတပ်မိလို့လေလား သေချာအောင် ပြန်စမ်းကြည့်ရပါသေးတယ်။)
(၄) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကို လက်နှိပ်စက်ရိုက်ပြီး ထုတ်ပြန်တာထက် ကွန်ပြူတာများကို သုံးစွဲပြီး စာစီစာရိုက်လုပ်ကာ ထုတ်ပြန်ဖို့လည်း အကြံပြုပါတယ်။
(၅) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Facebook သုံးရင် မိတ်ဆွေအများဆုံး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သုံးဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။
(၆) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီကွန်ယက် ဆိုတာကို အင်မတန် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားက စလို့ သြစတေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်စတဲ့ ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်အရပ်ရပ်ကို ရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့လို မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး တစုတစည်းတည်း တက်ညီလက်ညီ ပါဝင် လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ကွန်ယက်ကြီးတခု ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
(၇) ပြည်ပမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အများအပြားရှိတဲ့အတွက် One Dollar Campaign လို့ခေါ်တဲ့ တစ်လကို မြန်မာတဦးလျှင် တစ်ဒေါ်လာ ထည့်ဝင်ပြီး ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်ကို ထောက်ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်မျိုး ပေါ်လာရင် ပြည်တွင်းက လှုပ်ရှားမှုတွေကို တော်တော်လေး ထိထိရောက်ရောက် ကူညီနိုင်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Monday, November 15, 2010
Labels: Thoughts Comments: (30)
(Photo taken from Irrawaddy website)
ဒီကနေ့ စင်္ကာပူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြို ဟောပြောပွဲနဲ့ ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ စပီကာကော်နာမှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ မဒမ်ပေါက စင်္ကာပူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ မူဝါဒကို သဘောကျ ထောက်ခံတဲ့အလျောက် သူတို့ပါတီပွဲတွေမှာ ဗော်လံတီယာအနေနဲ့ သွားရောက် လုပ်အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ (ကျနော်တို့က ပီအာရ်အနေနဲ့ ဗော်လံတီယာ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။) ဒီကနေ့လည်း မနက် ၉ နာရီကနေ ည ၈ နာရီခန့်အထိ သွားရောက် ကူညီရင်း ပွဲကို တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုသတင်းကို နားစွင့်နေရင်းပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တမျှော်မျှော်လုပ်နေရာက (ကျနော့်အထင်) ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း စဝင်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားတဲ့အခါ ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာချီး မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အလှည့်မှာ “ပထမဦးဆုံး ဝမ်းသာစရာသတင်းကို ပြောပြစရာ ရှိပါတယ်” လို့ ကြေညာပါတယ်။ ဒီနောက် တဆက်တည်း “ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံနဲ့ သိပ်မဝေးလှတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၂ အတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါပြီ” လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ လာရောက်နားထောင်ကြတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ပရိတ်သတ်အားလုံးက ဝမ်းသာအားရနဲ့ အားပါးတရ ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်လက်ခုပ်တီး အားပေးကြတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသာမက သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ခပ်ကင်းကင်းနေလေ့ရှိကြတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေကတောင် လေးစားချစ်မြတ်နိုးကြတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နေ့တနေ့ပါ။။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, November 13, 2010
Labels: အမှတ်တရ Comments: (67)
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က နအဖ စစ်အစိုးရ ပြုလုပ်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး အပြီးမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းအထွေထွေကို လိုက်ဖတ်ရင်း ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလက မိုးမခ ကာတွန်းဆရာ ပီကာဆို မောင်ရစ် ရေးဆွဲတဲ့ ကာတွန်းတကွက်ကို ပြန်မြင်ယောင်မိလို့ အင်တာနက်ပေါ်က ပြန်ရှာပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကာတွန်းမောင်ရစ် - “ချေး” ဆိုသည်မှာ စမ်းပြီးတောင် စားကြည့်သင့်သည့်အရာ မဟုတ်ပါ
(စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၀)
အတန်တန် တားနေတဲ့ ကြားထဲက ကရဝိတ်ရေခဲမုန့်အမှတ်နဲ့ အားပါးတရကြီး ဟဲလိုက်ကြသူတွေ အခုတော့လည်း မြိုလို့မကျနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါ့....း-)
(၁) မင်းသမီး ၃ ပါးနှင့် NDF အရှုံးနှင့်ကြုံ
(၂) ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ ကြိုတင်မဲကြောင့် တစည ဝက်ဝက်ကွဲရှုံးဟု ဆို
(၃) “NLD မှန်ပါတယ်” ဟု ဦးနေမျိုးဝေပြော
(၄) မဲမသမာမှုရှိနေသည့်အတွက် အန်ဒီအက်ဖ် ကန့်ကွက်ရန် ပြင်ဆင်
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, November 9, 2010
Labels: sharing Comments: (26)
ဘောလုံးဆိုတာ အလုံးကြီးဆိုတော့လဲ ဘယ်အသင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ ပြောရခက်သား.....။း-)
Posted by ကိုပေါ on Sunday, November 7, 2010
မြန်မာပြည်တွင်းက ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူ လုပ်နေကြသမျှ အဖွဲ့တွေထဲမှာ ဒီဆိုင်းအဖွဲ့တွေပဲ ကျက်သရေအရှိဆုံး။ နားဝင်ပီယံ အဖြစ်ဆုံး။ သူ့အလုပ် သူလုပ်ပြီး တာဝန်အကျေဆုံး။ အညီညွှတ်ဆုံး။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။ ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ အမြန်ဆုံး စစ်ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
(စစ်အစိုးရရဲ့ တရားမျှတမှုမရှိသော၊ မလွတ်လပ်သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင် ပို့စ်။)
Labels: history Comments: (17)
ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဟုမ်လင်းပါ့ခ် စပီကာစ်ကော်နာမှာ ပြုလုပ်တဲ့ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ” က ဓါတ်ပုံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူ စင်္ကာပူနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေပါ မိုးထဲလေထဲမှာ အရောက်လာပြီး ပူးပေါင်းဆန္ဒပြကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ခွပ်ဒေါင်းအလံက ကျနော်တို့ပွဲမှာ လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ အင်န်အယ်လ်ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေ (မလေးရှား)က FedEx နဲ့ ပေးပို့ကူညီတာပါ။ ပိုစတာတွေကတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက (အခမဲ့) ရပါတယ်။ "No to Burma's sham Election” ဆိုတဲ့ ဘန်နာက “ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်းစင်္ကာပူ”က စီစဉ်ပေးတာပါ။ စစ်အစိုးရအလံသစ်နောက်ခံ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘန်နာတွေကတော့ အမေရိကားမှာ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြသူတွေဆီကနေ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကတဆင့် တောင်းယူရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဝတ်ထားတဲ့ "NO" တီရှပ်နဲ့ ဦးထုပ်အနီတွေက ၂၀၀၈ မေလက မြန်မာသံရုံး(စင်္ကာပူ)ရှေ့မှာ အခြေခံဥပဒေဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း သုံးတဲ့ တီရှပ်နဲ့ ဦးထုပ်တွေပါ။
ဒီကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကို ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်းစင်္ကာပူ အဖွဲ့က ကမကထ ပြုပါတယ်။ အဲသည်အဖွဲ့က ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ မြန်မာတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွမှုကို အတုယူအားကျစိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ “Sg human rights" အဖွဲ့ (အခုတော့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီ)က အဖွဲ့ဝင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရခြင်း အကြောင်းတွေကတော့....
(၁) ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို နအဖ စစ်အစိုးရက ယခုအချိန်အထိ လေးစားအသိအမှတ်မပြုခြင်း
(၂) ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကျနော့်အနေနဲ့ ကန့်ကွက်လိုခြင်း
(၃) မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေအရ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်ခြင်း
(၄) အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ခြင်း၊ (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်မပေးခြင်း)
(၅) အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားအုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်စေမှာသာဖြစ်ခြင်း....
စတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကြောင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ တုန့်ကနဲ ရပ်တန့်သွားချင်မှ ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရပ်သည်ဖြစ်စေ... ကိုယ့်ဖက်က ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်သင့်တယ်။ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အလျောက် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်မှာ လူအများရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ထပ်တူကျတဲ့အချိန်၊ လူအများစုရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ အချိတ်အဆက်မိသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ အခြေအနေတရပ်ကို ဖန်တီးထူထောင်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော့်ကင်မရာထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဒီလင့် မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, October 30, 2010
Labels:္ဒ Comments: (31)
Image Credit - Link -
အိပ်ယာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်
အင်တာနက်နဲ့ တရားနာ (နိုင်ငံရေးတရားပြောပါတယ်)
သြော်... တစက္ကန့်ကလေးမှ မအားရသူပါ။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, October 24, 2010
Labels: myself Comments: (30)
ကမ္ဘာတလွှားမှ ၂၀၁၀ လိုဂို အမျိုးမျိုး.....
Posted by ကိုပေါ on Saturday, October 23, 2010
Labels: general Comments: (12)
လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံ စပီကာကော်နာမှာ ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်း(စင်္ကာပူ)ကနေ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲကို လာရောက် ပူးပေါင်းကြဖို့အတွက် ဖိတ်ကြားစာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့နေရာ အသေးစိတ်ကို ဘန်နာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
S’poreans to speak up against Burma’s sham elections
As Burma prepares itself for its General Elections, which have been criticized worldwide for being neither free nor fair, the Free Burma Campaign (Singapore) is lending its voice to the criticism with an event at Speakers’ Corner on 30 October.
From the Free Burma Campaign:
Join us at Speakers’ Corner on Saturday, 30 October 2010 from 4pm to 4.45pm to say “NO TO BURMA’S SHAM ELECTIONS” .
Come foraphoto session and get your voice heard withalarge placard that reads “No to Burma’s Sham Elections”. Asagesture of solidarity, do wearared shirt for the event.
The Burmese Junta is determined to push through with elections on7November 2010. This is being done despite electoral laws that clearly do not allowafree and fair election.
Long-time dissident and Nobel Peace Prize laureate Daw Aung San Suu Kyi remains under house arrest while many political prisoners are still held in prison. Meanwhile, the Burmese people are living in constant fear of torture and harassment under the military regime.
Join us as we stand in unity with the people of Burma. Let us come together to say “No” to the planned election –asham election that does not represent the true voice of the people.
No to Burma’s Sham Election!
Our Facebook event page - http://www.facebook.com/event.php?eid=155688537800050
အညွှန်းလင့်ခ်။...........။ S’poreans to speak up against Burma’s sham elections
Posted by ကိုပေါ on Friday, October 22, 2010
Labels: event Comments: (21)
အလံသုံးမျိုး တပြိုင်တည်း ခိုးတယ်။
(မှတ်ချက်။............။ စာကြောင်းတိုင်းမှာ စကားလိမ်ဖြင့် ဖတ်ရန်မလိုပါ။)
Posted by ကိုပေါ on Thursday, October 21, 2010
Labels: Poem Comments: (39)
Photo credit - Link -
အိုင်ဖုန်း အိုင်မက် (iphone, imac)
အိုင်ပက်၊ အိုင်ပေါ့ဒ် (ipad, ipod)
ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ထွက်ချလာ။
ထစ်ကနဲဆို ပြောင်းဝက ကျည်ထွက်
မနှစ်သက်စရာ သေနတ်ပစ် တကယ်သန်တဲ့
သြော်... စစ်ထွက်ငနာတွေ အရပ်ဝတ် ဖလှယ်ပြန်။
သူ့အမေလင် ပစ္စည်းလို အပိုင်ကုပ်ပြီး
စင်္ကာ...တက္ကရဲ့ ကျွန်းညိုမြဝယ်... (ထိုးထိုးထောင်ထောင် ကရိန်းလေးတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ဖျောက်ကြည့်ပါ။ တကယ်လှပါတယ်။)
တစိမ့်စိမ့်လေးလည်း အေးတယ် (အဲယားကွန်းဖွင့်ထားလို့)
ဘုရားစူး... နှင်းမဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။ အင်ဒိုနီးရှား တောင်ယာမီးရှို့ရာက နှစ်စဉ်လိုလို စင်္ကာပူဖက်ကို လွင့်လာတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေပါ။ ဒီလိုပဲ.. စင်္ကာပူမှာ ဆောင်းရာသီမကြုံရလို့ ကြံဖန်ပြီး သီချင်းလေးနဲ့ ဆောင်းဖီလင် သွင်းယူကြည့်လိုက်တာပါ။ စင်္ကာပူမှာနေထိုင်သူတွေအဖို့ ဒီအတိုင်းနေလည်း အသက်ရှူလေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါရမယ့်အတူတူ နေရတာ တန်အောင် မဖြစ်မနေ ဆေးလိပ်သောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းစုံသိလိုချင်ရင် ဓါတ်ပုံအောက်က လင့်ခ်မှာသာ သွားဖတ်ကြည့်ပါတော့။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, October 20, 2010
ဒီကာတွန်းကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဆွဲခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကာတွန်းလက်ရာလေးပါ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များဆီက ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ အကူအညီပေးမယ် အသံထွက်လာတုန်းက ဗိုလ်သန်းရွှေတယောက် အူယားဖားယားနဲ့ ဘန်ကီမွန်းကို လက်ခံတွေ့ဆုံတာကို သရော်ချင်လို့ ဆွဲခဲ့တာပါ။ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ နအဖအကြားက ဆက်ဆံရေးကို “The marriage of convenience” လို့ ဆိုလိုခဲ့ချင်တာပါ။ ဗိုလ်သန်းရွှေကို သတို့သမီးနေရာကထားပြီး လက်ထပ်ကတိတွေ ပေးနေတဲ့ပုံ ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ကာတွန်းနာမည်ကိုတော့ “ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး” လို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂက စေလွှတ်လိုက်တဲ့ စစ်သည်တော်သုံးသိန်းဖြစ်တဲ့ ရာဇာလီ၊ ဂမ်ဘာရီနဲ့ ဘန်ကီမွန်းတို့ မစွံပုံကို အကြောင်းပြုပြီး “RGB နဲ့ ကျွဲမေတ္တာစာ” ဆိုပြီး ကဗျာပြောင်လေးတပုဒ် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သိကြတဲ့အတိုင်း နအဖ စစ်အစိုးရက တဖက်မှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်။ ဘန်ကီမွန်းခမြာမှာလည်း “အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်း” ထုတ်ပြန်ချက်တွေကလွဲပြီး တကယ်တမ်း ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် တုန့်ပြန်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် NLD ဦးဝင်းတင်ကတောင် ဘန်ကီမွန်း ဒီလောက်စိုးရိမ်နေရတဲ့အတွက် နှလုံးရောဂါဖြစ်မှာ စိုးရပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဟာသစွက်ပြီး ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဘွဲ့အမည်တခုပေးရန် ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မိတဲ့အလျောက် ကိုမိုးတိမ်ညိုရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်တခုမှာ ဝင်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျနော့် ကွန်မင့်ကို နည်းနည်း မွန်းမံပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
“ဘန်ကီမွန်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဘွဲ့အမည်”
ကျနော် တခါတလေ လျှောက်စဉ်းစားတယ်။ ဂေါက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာ။
လူဖြူ ယောက်ျား၊မိန်းမ၊ကလေးတွေကို ကြည့်ရင် ဆံပင်တွေကလည်း ရွှေရောင်နဲ့၊ အသားအရောင်ကလည်း ဖြူဖွေးတယ်။ အရပ်အမောင်းကလည်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း။ ရုပ်ရည်ကလည်း ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတွေ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်။ ငေးကြည့်ရတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကလည်း တိုးတက်ပြီး လိုတရဆိုသလို ဖြစ်နေတော့ ဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ နတ်ပြည်ဆိုတာ ဒါမျိုးလားလို့ တခါတခါ တွေးမိတယ်။ ဒီလိုတွေးလို့ ကျနော့်အဆိုးမဆိုပါနဲ့ဦး။
သိပ္ပံပညာမှာ အနာဂတ်ကို ခရီးသွားခြင်း travel to the future ဆိုတာ သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်သတဲ့။ ဒီတော့ ကျနော်စဉ်းစားတာ ဗုဒ္ဓက အတုမရှိတဲ့ ဉာဏ်တော်၊ တန်ခိုးတော်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်လေတော့ အနာဂတ်ကာလကို ဒေသစာရီ (ပါဠိမကျွမ်းတော့ ကာလစာရီ လို့ ပြောရင် ပိုမှန်ရမလားမသိ) ကြွချီရင်းနဲ့များ ယနေ့ခေတ် တိုးတက်တဲ့ လူဖြူနိုင်ငံတခုခုဆီ ရောက်သွားခဲ့လေသလားလို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ တွေးမိတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေးရသလဲဆိုတော့ တိုက်ဆိုင်တာတွေ ရှိနေတယ်ခင်ဗျ။
ဥပမာ သိကြားမင်းစီးတဲ့ နတ်မြင်းတထောင်ကတဲ့ ရထားဝေဇယန္တာ ဆိုတာမျိုးဗျာ။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မြင်းကောင်ရေတထောင်၊ တသောင်းအားရှိတဲ့ လေယာဉ်ပျံလို၊ ရဟတ်ယာဉ်လိုဟာမျိုး၊ Air Force One လိုဟာကြီးတွေကို ပြောတာလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဝရဇိန်လက်နက်ဆိုရင် “မြင့်မိုရ်ကိုပင် သူခွင်းရင် ထွင်းလို့ဖောက်နိုင်တာ” ဆိုတော့..... တာလီဘန်တွေကို အမေရိကန်ဗုံးကြဲတုန်းက Banker Buster လိုဟာမျိုး၊ အနုမြူထိပ်ဖူးတပ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်လိုဟာမျိုးတွေကို ပြောချင်တာလားလို့ တွေးမိတယ်။ သိကြားမင်းဆိုတာကတော့ အဲဒီလက်နက်ကို ပိုင်တဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုခုက သမ္မတ (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ရမယ်။ ဘန်ကီမွန်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငရဲသနင်း ယမမင်းဆိုတာကတော့ နေပြည်တော်က အဘကို ပြောတာဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိတယ်ခင်ဗျ။
နောက်ပြီးတော့ဗျာ.... နတ်သက် တရက်က လူ့ပြည်မှာ အသက်တထောင် ဆိုတာတွေ။ ဒါကလည်း ပိုပြီး မြန်မြန် ခရီးသွားသူအတွက် အချိန်ဟာ ပိုနှေးကွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ရီလစ်တီဗတီသီအိုရီက သဘောတွေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ကိုက်နေပြန်ရောဗျ။
ဘန်ကီမွန်းကတော့ သိကြားမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် လေနတ်သားများ ဖြစ်လေမလားဆိုပြီး ရောက်တတ်ရာရာ စဉ်းစားမိပါကြောင်း.....။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, October 19, 2010
Labels: general Comments: (45)
နှမြောမြောနဲ့ စုထားသမျှ ပိုက်ဆံလေးကို
ပြည်တွင်းက သတင်းတွေ ကြားကြားသမျှ
ကမ္ဘာမှာ နေရာမှားပြီး လူဖြစ်လာခဲ့လေသလားလို့
နမီးဘီးယားက AIDS ရောဂါသည် မိဘမဲ့ကလေးက
မညှာမတာ ချီးပါချတဲ့ အကောင်တွေကလည်း တင်းကြမ်းပြည့်။
ပင်စည်ကို တေ့ပြီး သေးပန်းတတ်တဲ့ကောင်တွေလည်း
Posted by ကိုပေါ on Monday, October 18, 2010
Labels: Joke Comments: (15)
(ဟိုတနေ့က မိတ်ဆွေတယောက် ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ။)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တပ်တွေ မြန်မာပြည်ကို ဝင်အလာ ရွာတရွာ ရောက်တော့ ဂျပန်တပ်တွေက ရွာထဲရှိသမျှ မိန်းမမှန်သမျှကို တယောက်မကျန် မုဒိန်းကျင့်သတဲ့။ အဲသည်လို အကျင့်ခံရတဲ့အထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ပေါက်ဖော်ကြီးတယောက်ရဲ့ ဇနီးလည်း ပါသတဲ့။
ဒီကိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီး ခြောက်လ တနှစ်လောက် ကြာတဲ့အထိ တရုတ်ကြီးက အဲဒီကိစ္စအပေါ် မကျေမချမ်းနိုင်သေးဘဲ တဖွဖွ ပြောနေသတဲ့။ ဒီတော့ မိန်းမကလည်း ကြာလာတော့ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ယောက်ျားကို ပြောတယ်။ “ဒီမှာ၊ ကျမ တယောက်တည်း ကွက်ပြီး မုဒိန်းအကျင့်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ တရွာလုံးအကျင့်ခံရတာပဲ။ ရှင်က ဘာလို့ တမူထူးခြားပြီး မကျေမချမ်းဖြစ်နေတာလဲ” လို့ ပြောသတဲ့။
အဲသည်အခါ တရုတ်ကြီးက တရုတ်သံဝဲဝဲနဲ့... “အေး.... တရွာလုံး မုဒိန်းအကျင့်ခံရတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေ မင်းကို မုဒိန်းကျင့်တုန်းက မင်းက အောက်ကနေ ဟောစိလို ဟောစိလို (ဟောဒီလို ဟောဒီလို) အလိုက်သင့် ကော့ ကော့ပေးတာကို မြင်ရလို့ ငါက မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတာကွ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါသတဲ့။
အခုလည်း နအဖ အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဟားဒယားကြီးကျင်းပလို့ သူတို့လိုချင်ရာကို (မုဒိန်းကျင့်သလို) အဓမ္မနည်းနဲ့ အရယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဒီအနေအထားမှာ (၁၉၉၀ခုနှစ်က ရွေးချယ်ခံ)ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတချို့နဲ့ ဂျာနယ်လစ်အမည်ခံ တတိယ အုပ်စုဝင် အချောင်နှိုက်သမားများဟာ ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြရမယ့်အစား နအဖကို အလိုတူ အလိုပါ “ဟောစိလို ဟောစိလို” အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားပေးနေတာ တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် ပြည်သူတဦးအနေနဲ့ အင်မတန်မှ အော့နှလုံးနာမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, October 16, 2010
Labels: political post Comments: (18)
(ရှေ့က ပို့စ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အတွက် အရင်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပို့စ်နှစ်ခုကို ပြန်လည် ဆန်းသစ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမ အပုဒ်က အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ဆန်ပြီးတော့ ဒုတိယ တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “သရုပ်ပျက်လို့ ပြောသင့်သလား” ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဟာ ရှေ့မှာ တင်ခဲ့တဲ့ “နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားရာဝယ်” ပို့စ်နဲ့ အထူး ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။)
မြန်မာဘာသာစကားမှာ အနက်အဓိပ္ပါယ်တခုထက်ပိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေရှိပြီး သုံးစွဲတဲ့အခါ နားထောင်သူအဖို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်မလွဲအောင် သတိထားသုံးစွဲရတာတွေ ရှိပါတယ်။
ယုံကြည်မှုလို့ ဆိုလိုက်ရင် တစုံတခုအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု (Belief) ဆိုလိုတာ ဖြစ်နိုင်သလို တဦးနဲ့ တဦး အပြန်အလှန် ယုံကြည်စိတ်ချမှု (Trust)ကို ဆိုလိုတာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ယုံကြည်မှုဟာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားက ယုံကြည်မှုဟာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာ အဲဒီ ယုံကြည်မှု အကြောင်းကို ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြောချင်တာဟာ အရေးတော်ပုံတခုအပေါ် ယုံကြည်မှုကို ပြောချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရေးတော်ပုံအတွင်းမှာ အတူတကွပါဝင်ကြမယ့် ရဲဘော်ရဲဖက် အချင်းချင်းအကြားက ယုံကြည်မှုကို ပြောချင်တာလား။ နားထွေးသွားနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဝေါဟာရ တခုက..... “ယဉ်ကျေးမှု”။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမှာလည်း လူမျိုးတမျိုး၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ( Culture ) နဲ့ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ( Politeness )ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပြားပါတယ်။
အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု (Politeness )မှာတောင်မှ နှစ်မျိုးနှစ်စား ထပ်ခွဲရမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ပထမ တမျိုးက လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ အစဉ်အလာအရသတ်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ကေတတွေ( etiquette )ပါ။ အဲဒါတွေက ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကို ဦး၊ ဒေါ် တပ်ပြီး ခေါ်ဝေါ်တာမျိုး၊ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ ပြုမူတာမျိုးတွေ၊ သံခင်းတမန်ခင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ပြောဆိုတဲ့အခါ၊ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲတွေ၊ ဧည့်ခံပွဲတွေတက်ရောက်တဲ့အခါ နေရာဒေသအလိုက် လိုက်လျောညီထွေ ပြုမူပြောဆိုသင့်တယ်လို့ အများလက်ခံသတ်မှတ်ထားချက်တွေပါ။
ဒုတိယတမျိုးကတော့ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးပါ။ အဲဒါက တဖက်သားအပေါ်မှာ လေးစားမှု၊ ကိုယ်ချင်းစာမှု တို့ကို ပြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးပါ။ ဥပမာ ကိုယ့်ဝေစု ရိက္ခာထုပ်ကို ကိုယ်မစားပဲ ကိုယ့်ထက် ငတ်ပြတ်နေသူကို ကျွေးလိုက်တာမျိုး၊ အတူတကွ ခရီးထွက်လာသူချင်းအပေါ်မှာ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊ သူတပါးအပေါ်မှာ မတရားလူလည်ကျခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့ကို စက်ဆုတ်မှုမျိုး၊ သူတပါးလွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိပါးတာမျိုး စတဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေဟာ အယဉ်ကျေးဆုံး အပြုအမူတွေပါ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ အယဉ်ကျေးဆုံး အပြုအမူတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ မျှမျှတတ ရှိမှုအပေါ်မှာ အရင်းခံပါတယ်။
လူတဦးတယောက် (သို့မဟုတ်) အစုအဖွဲ့တခုဟာ အဆင့်မြင့်ပညာတွေတတ်ကောင်း တတ်နေနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအရလည်း ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တဖက်ဖက်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အာဏာကို လက်ကိုင်ရထားတာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ လူတဦးတယောက် (သို့မဟုတ်) အစုအဖွဲ့တခုဟာ အခြားလူတွေအပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ခေါင်းပါးပြီး မျှမျှတတ ရှိဖို့ မကြိုးစားဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်တတ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရာထူးဌာနန္တရ ကြီးကြီး မယဉ်ကျေးသူလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေရာမှာ စောစောကပြောတဲ့ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ( Culture ) အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ တိုက်ပုံအင်္ကျီ၊ တောင်ရှည်ပုဆိုး၊ မောင့်ကျက်သရေ ခေါင်းပေါင်း စတဲ့ အဆင်တန်ဆာသက်သက်ကို ၀တ်ဆင်ပြရုံနဲ့ ယဉ်ကျေးသူလို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ အလားတူပဲ လူကြီးရှေ့မှာ ခါးကုန်းသွားတတ်ပြီး၊ နှုတ်ကနေ ချိုသာယဉ်ကျေး ပြောဆိုတတ်ရုံမျှနဲ့လည်း ယဉ်ကျေးသူလို့ ပြောလို့ မရပြန်ပါဘူး။
တကယ့်အယဉ်ကျေးဆုံးလူသားဆိုတာက လူသားအချင်းချင်းအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ မျှမျှတတ ဆက်ဆံတတ်သူသည်သာလျှင် အယဉ်ကျေးဆုံးလူသားလို့ ကျနော်ယူဆချင်ပါတယ်။
အလားတူ နောက်ထပ် ဝေါဟာရတခုကတော့...... “ရိုးတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။
ရိုးတယ်ဆိုတာ ရိုးသားတာ (Sincere) ကို ပြောတာဖြစ်နိုင်သလို၊ အနေအထိုင် အတွေးအခေါ် မဆန်းပြား မရှုပ်ထွေးခြင်း ( Simple ) ကို ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်၊ ရိုးအခြင်း၊ ထူခြင်း (Naive) ကို ပြောလိုခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီသုံးမျိုးမှာ ရိုးသားခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတခုလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရိုးသားတယ်ဆိုတာ တဖက်သားကို လှည့်ဖြားလိုတဲ့သဘော ကင်းစင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လောကမှာ ဘယ်သူမှ လှည့်ဖြားခံရခြင်းကို နှစ်သက်မယ်မထင်ပါဘူး။ “လက်တွေ့လောကမှာ” ဆိုတဲ့ စကားကို ရှေ့မှာ ခံထားရခြင်းကတော့ “အနုပညာအရ” လှည့်ဖြားခြင်းလည်း ရှိနိုင်သေးလို့ပါပဲ။
အနုပညာမှာတော့ လှည့်ဖြားဆိုတာထက် တကယ်မရှိတာကို ရှိသယောင် ဖန်တီးယူခြင်းတွေ ပါဝင်လို့ပါပဲ။ အဲသည်လို လှည့်ဖြားခြင်းကိုတော့ အနုပညာကို ခံစားတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ သဘောသဘာဝအရ တကယ်မဟုတ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့လောကမှာ လှည့်ဖြားခြင်းကတော့ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ လူအချင်းချင်းအပေါ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ မျှမျှတတရှိမှုကို မလေးစားရာ၊ ဖောက်ဖျက်ရာရောက်တဲ့အတွက် မယဉ်ကျေးတဲ့ အပြုအမူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လှည့်ဖြားခြင်းသဘော ကင်းစင်တဲ့အတွက် ရိုးသားခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတခုလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
အနေအထိုင် အတွေးအခေါ် မဆန်းပြား မရှုပ်ထွေးခြင်း (Simple) ဖြစ်ခြင်းကတော့ လူတဦးတယောက်ချင်းရဲ့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကောင်းတယ်ဆိုးတယ် ပြောစရာ မရှိတော့ပါဘူး။ တိုက်ပုံနဲ့ ပုဆိုးကို နှစ်သက်သူက တိုက်ပုံပုဆိုးကို ၀တ်နိုင်သလို၊ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ နားသံသီးဝတ်ချင်သူကလည်း သူ့ဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ငါက တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုးဝတ်လို့၊ ငါက ရင်ဖုံးနဲ့ ချိတ်ထမီဝတ်လို့ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စကပ်ဝတ်တဲ့လူတွေထက် ပိုပြီး လူကောင်းဖြစ်တယ်၊ ပိုပြီး လူယဉ်ကျေးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရင် မှားယွင်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်ဆုံးတခုဖြစ်တဲ့ ရိုးအခြင်း ( Naive )ကတော့ မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လို့ သဘောရပါတယ်။ အတယ်ဆိုမှတော့ ဘယ်ကောင်းပါတော့မလဲ။ သူတပါးက ကိုယ့်အပေါ်မှာ မမျှမတလာလုပ်ရင်လည်း ခံရတော့မှာကိုး။
ကျနော်ငယ်ငယ်က အ ပုံကို အလျဉ်းသင့်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျနော် သုံးလေးနှစ်သား အရွယ်က ကျနော့်အိမ်ကို လာလည်တဲ့ အကိုဝမ်းကွဲတယောက်ဟာ အိမ်ကို ရောက်တိုင်း ကျနော်ကို အနင်းခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း နင်းပေးတာပေါ့။ နင်းလို့ မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာပြီဆိုရင် အကိုက အောက်က အနင်းခံရင်းက ကျနော့်ကို နင်းခ တောင်းပါတော့တယ်။ ကျနော်ကလည်း အကို့ကို နင်းခ ပေးဖို့အတွက် အမေ့ဆီပြေးပြီး ပိုက်ဆံတောင်းပါတယ်။
အမေကတော့ ပြောရှာပါတယ်။ “ငါ့သားနှယ်.... အလိုက်တာဟယ်။ နင်က နင်းခ ပေးရမယ့်လူမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ နင်က ရ ရမယ့်လူ။” ။ ဒါနဲ့ ကျနော်က အကို့ဆီကို ပြန်ပြေးပြီး ကျနော်က နင်းခ ရ ရမယ့်လူ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောပြတယ်။ အကိုက တခါ ရှင်းပြပြန်တယ်။ “ဒီမှာ.... မင်းက ငါ့အပေါ် တက်နင်းတဲ့သူ။ ငါက အနင်းခံရတဲ့လူ။ ငါ့မှာ အနင်းလည်းခံရသေးတယ်၊ မင်းကိုလည်း နင်းခ ပြန်ပေးရဦးမယ်ဆိုတော့ မင်းတရားသလား” လို့ ပြန်မေးတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း အမေ့ဆီကို ပြန်ပြေးပြီး ကျနော်သာလျှင် နင်းခကို ပေးရမယ့်သူ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အမေ့ကို နောက်တခေါက် ရှင်းပြရ ပြန်တာပေါ့။ ကဲ.... ကျနော့်မွေးသမိခင်အဖို့တော့ သူ့သားတော်မောင်ရွှေသွေးဟာ ဒီလောက် အူအနေပုံကို ဘယ်လောက်များ အားမလိုအားမရ ဖြစ်လိုက်လေမလဲ။
အဲဒါ ကျနော်ငယ်ငယ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ အခုကြီးတော့လည်း အဲဒီလို ရိုးအပုံကို မကောင်းမှန်းသိလို့ ပြုပြင်ပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာတော့ ခံရဆဲပါ။
ကဲ......ရှေ့တပို့စ်တုန်းကလိုပဲ။ ကျနော့်ပို့စ်ကို မေးခွန်းလေးတခုနဲ့ အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မယဉ်ကျေးဆုံးလို့ ယူဆသတ်မှတ်တဲ့ အပြုအမူလုပ်ရပ်ဟာ ဘယ်လိုအပြုအမူလုပ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပါသလဲ။
ငယ်စဉ်က မဂ္ဂဇင်းတစောင်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းတခုကို ပြက်ပြက်ထင်ထင် မှတ်မိနေသည်။ လေးကွက်ကာတွန်း။
ပထမတကွက်တွင် ဘောင်းဘီဖင်ကျပ် ၀တ်ဆင်ထားသူ ခေတ်ဆန်ဆန် ဆံရှည်လူငယ်တဦးကို တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုး ၀တ်ဆင်ထားသူတဦးက လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးကာ “သရုပ်ပျက်” ဟု ခေါ်ဆိုနေပုံကို ရေးဆွဲထားသည်။
ဒုတိယအကွက်တွင် ထိုတိုက်ပုံဝတ်လူငယ်အား ခေါင်းပေါင်း၊ တောင်ရှည်တို့ကို ၀တ်ဆင်ထားသူတဦးက လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးကာ “သရုပ်ပျက်” ဟု ခေါ်ဆိုနေပုံကို ရေးဆွဲထားသည်။
တတိယအကွက်တွင် ထိုတောင်ရှည်ဝတ်လူအား သားရေနံငယ်ပိုင်းကို ၀တ်ဆင်ထားသော ကျောက်ခေတ်လူသား (လက်ထဲတွင် ကျောက်တုံးပုဆိန်ကိုင်ထားသူ)က လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးကာ “သရုပ်ပျက်”ဟု ခေါ်ဆိုနေပုံ ရေးဆွဲထားပြန်သည်။
နောက်ဆုံးအကွက်တွင်ကား ကျောက်ခေတ်လူသားကို လက်ညိုးငေါက်ငေါက်ထိုး၍ “သရုပ်ပျက်”ဟု ခေါ်ဆိုနေသည်မှာ မျောက်ဝံတကောင်ဖြစ်သည်။
ဤကာတွန်းကလေးကို သတိရမိတိုင်း လူတို့၏ ရှေးရိုးစွဲတတ်ပုံ၊ အသစ်အဆန်းကို လက်မခံချင်သည့်စိတ်ဓါတ် စွဲမြဲနေပုံတို့ကို သတိပြုမိသည်။
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ကူးလူးရောယှက်ကာ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် လှုပ်ရှားတိုးတက်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Cosmopolitan)တွင် အသစ်အဆန်းကို မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားကာ လွယ်လင့်တကူ လက်ခံတတ်ကြသလောက် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်ကာ အထီးကျန်ဆန်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အသစ်အဆန်းကို လက်ခံရန် တွန့်ဆုတ်တတ်ကြသည်။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင်ကြသည်။ မိမိ မိရိုးဖလာ လက်ခံကျင့်သုံးလာသော ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့နှင့် မကိုက်ညီသော၊ ခွဲထွက်သော အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူတို့နှင့် သစ်ဆန်းသော အရာမှန်သမျှကို အလွယ်တကူ လက်မခံရုံမက ပြစ်တင်ရှုံ့ချတတ်သော သဘောရှိသည်။ မိရိုးဖလာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကျင့်ကြံခြင်းကို မြင့်မြတ်သည်၊ ယဉ်ကျေးသည်၊ ကောင်းမွန်သည်ဟု အထင်ရှိတတ်ကြသည်။
သတိပြုရန်မှာ မြန်မာပြည်တွင် တချိန်က သရုပ်ပျက်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သော တေးဂီတ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတို့သည် ယနေ့ လူကြီးလူငယ် လက်ခံနေကြပြန်သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
လူတို့၏ စိတ်နေသဘောထားကို အ၀တ်အစားအဆင်အပြင်ကို ကြည့်ရှု၍ ဆုံးဖြတ်ရန်မသင့်ဟူသော အချက်ကို လက်ခံပါက လူတကိုယ်အကြိုက်တမျိုးဆိုသည့် စကားပမာ လူတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော အကြိုက်တရားကို နားလည်လက်ခံနိုင်၍ အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရန်သာ ကြိုးပမ်းသင့်သည်။
လွတ်လပ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် မိမိ၏ အကြိုက်တရားကို စံတခုသဖွယ် ရှေ့တန်းတင်လျက် လူတိုင်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန် မပြုကျင့်ကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မိမိအကြိုက်တရားသည်သာ အမှန်ကန်ဆုံး၊ အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ အယဉ်ကျေးဆုံးဟု သဘောမထားကြသောကြောင့်ပင်တည်း။ အကြိုက်တရားဟူသည် မတူညီနိုင်ကြဟူသော အချက်ကို လက်ခံကြသောကြောင့်ပင်တည်း။ မိမိမျက်စိထဲတွင် ကျက်သရေရှိလှသည်ဟု ထင်သောအရာတခုသည် အခြားလူတဦး၏ မျက်စိတွင် ထော်လော်ကန့်လန့် နိုင်သော အရာတခုလည်း ဖြစ်နေနိုင်သောကြောင့်ပင်တည်။
ကိုယ့်ကျင့်တရားနှင့် ပတ်သက်လျှင်သာ စံချိန်စံညွှန်းများ ထားရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယဉ်ကျေးမှု(Culture)နှင့်ပတ်သက်၍ကား စံချိန်စံညွှန်းများကို လူတိုင်းအပေါ်တွင် အာဏာတည်သက်ရောက်စေရန်မသင့်။ အမှန်စင်စစ်တွင်မူကား ယဉ်ကျေးမှုတို့သည် ခေတ်ကာလ၊ လူတို့၏ အတွေးအခေါ်၊ အကြိုက်တရား၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ တိုင်းတပါးနှင့် ကူးလူးရောယှက်ဆက်ဆံရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်တွင် မူတည်၍ အစဉ်သဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်။
ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ယဉ်ကျေးမှုကို ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားတခုတွင်သာ မူသေ ရပ်တည်နေစေရန် မည်သူမျှ စွမ်းဆောင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ။ စွမ်းဆောင်ရန် ကြိုးစားသူများအဖို့လည်း အနှေးနှင့် အမြန်ဆိုသလို ရှုံးနိမ့်မှုကိုသာ မုချကြုံတွေ့ကြရပေမည်။
ယဉ်ကျေးသူနှင့် ရိုင်းပျသူ (၁)
Posted by ကိုပေါ on Friday, October 15, 2010
Labels: republished Comments: (15)
တနေ့က အင်တာနက်ထဲမှာ လျှောက်ဖတ်ရင်း လူထုဒေါ်အမာရေးသားခဲ့တဲ့ “ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘလော့ဂ်တခုမှာ တင်ထားတာ ဖတ်ရတယ်။ ဆောင်းပါးထဲမှာ လူထုဒေါ်အမာက ဒီလို ရေးသားထားပါတယ်။
“ဘုန်းဘုန်း တာ့-တာ" ဆိုတဲ့အသံမျိုး မကြာမကြာ ကြားရလွန်းလို့ နားကလောတာနဲ့ ဒီခေါင်းကို တပ်လိုက်မိတာပါ။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ကလေးငယ်တွေကို လူကြီးမိဘတွေက ဘယ်သူပြန်ခါနီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် "တာ့-တာ" လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ဆိုပြီး လက်ပြခိုင်းနေကြပါတယ်။
မြို့ပေါ်တင်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီ တာ့-တာက တောကြိုအုံကြားအထိ ပျံ့နှံ့ဆင်းသက်လို့ နေပါတယ်။ ဒါကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မတို့မှာ ပြန်ခါနီးနှုတ်ဆက်စကား တခု မရှိမဖြစ်၊ အပူတပြင်း လိုအပ်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ လိုသမှ မဟားဒယားမို့ ကိုယ့်မှာလည်း မရှိလေတော့ သူများဟာကို အတင်းဆွဲယူသုံးထားရတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။
"တာ့-တာ" ဆိုတာ ဘယ်လူမျိုးက သုံးစွဲတဲ့ စကား၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဇစ်ဇစ်မြစ်မြစ် သိကြတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နို့ပေမယ့် လက်ကလေးလှုပ်ပြပြီး တွေ့ကရာလူကို "တာ့-တာ" နေကြပါတယ်။ တချို့ကများ ကဲသထက်ကဲပြီး "ဘိုင့်ဘိုင်- တာ့တာ-ချဲရီးယို" အထိ လုပ်နေကြလေရဲ့။”
အဲသည်လို အစချီလိုက်ပြီးတဲ့နောက် လူထုဒေါ်အမာက သူမငယ်ငယ်ကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာ ပြန်ကာနီးသုံးစွဲတဲ့ နှုတ်ဆက်စကား အမျိုးမျိုးအကြောင်း၊ မြန်မာစကားရဲ့ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝပုံအကြောင်းတွေကို ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီကမှတဆင့် မိုးကုပ်ဖက်က လူတွေ ပြန်ခါနီးနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ “ဖြည်းဖြည်းပြန်ပါရှင်” ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို ရှင်းလင်းရေးပြထားပြီး ...
“ဒါကြောင့် သူတို့ဆီမှာ ခွဲခါနီး နှုတ်ဆက်တဲ့ လူတိုင်းကို "ဖြည်းဖြည်းပဲပြန်ပါ" လို့ နှုတ်ဆက်မှာ မှာတာထင်ပါရဲ့။ မေတ္တာ စေတနာ ကရုဏာအပြည့်နဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ စကားမို့ ကြားရသူရဲ့ နားထဲမှာ ချမ်းမြေ့ကြည်နူး လိုက်တာ။ "တာ့-တာ" နဲ့ မကွာလား။ မြန်မာမှာ နှုတ်ဆက်စကားတွေ ကြွယ်ကြွယ်၀၀ ရှိပြီးသားပါ။”........လို့ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ (ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို အဆုံးမှာ ပြထားတဲ့ လင့်ခ်ကတဆင့် သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
ပို့စ်အောက်ခြေက ကွန်မင့်တွေကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မိုးရင်သွေး ဆိုသူရဲ့ ကွန်မင့်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ တော်တော်လေး သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သွားမိတယ်။ သူက ဒီလိုရေးထားတယ်ခင်ဗျ။
“ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ ကိစ္စမရှိပါဘူး တာ့တာပဲပြောပြော ပြန်ပါဦးမယ်လို့ပဲပြောပြော အဓိက ကတော့ မိမိစိတ်ထဲမှာ စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ ပြောမိဖို့ပါပဲသယ်ချင်းတို့ရယ်”....တဲ့။
ကျနော့်အမြင်ကလည်း မိုးရင်သွေးရဲ့ အမြင်နဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်။ အထူးသဖြင့် “ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ” ကိစ္စမှာ စကားမပြောတတ်သေးတဲ့ ကလေးတွေ နားလည်လွယ်တဲ့ ဝေါဟာရစကားလုံးနဲ့ သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုဒေါ်အမာအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဝေဖန်တာ လောကြီးသွားတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နားကလောတယ်ဆိုတာလည်း သူမအနေနဲ့ မနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရင်းအခံနဲ့ နားထောင်လို့သာ နားကလောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ “တာ့ တာ” ဆိုတဲ့စကားလေးဟာ ကလေးသူငယ်တွေက နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ တီတီတာတာနဲ့ အင်မတန် ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားသံလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာပဲ အောက်ဆုံးက ငပျော့ဆိုသူရဲ့ ကွန်မင့်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ အသံထွက်အောင်တောင် ရယ်မိပြန်ပါတယ်။ ငပျော့က ဟောဒီလို မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ခင်ဗျ။
ဒါဆိုဘယ်လိုပြောရမှာတုန်း "ပြန်တော်မူပါဘုရား "(ဒီလိုဆို ဘုန်းကြီး သေပါစေ ဆုတောင်းတာနဲကမတူလား )
ဒါမှမဟုတ် " ဘုန်းကြိး တာ့တာပါဘုရား " ပြောရမှာလား ဂျ
ငပျော့အမြင်တော့ တာ့တာ ဆိုတဲ့စကား ရိုင်းတယ်လို့မမြင်ပါဘုရား (အဲ့ယောင်လို့) ခင်ဗျ ”
ကျနော့်သဘောအရကတော့ ဘယ်လိုပဲ နှုတ်ဆက် နှုတ်ဆက်၊ စိတ်စေတနာသည်သာ အဓိက။ နှုတ်ဆက်သူနဲ့ နှုတ်ဆက်ခံရသူအကြားမှာ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် “ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ” မကလို့ “ဘုန်းဘုန်း ဆီးယူ” လို့ပဲ ပြောပြော အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ “ဟေ့..ဘုန်းကြီး ငါ့မျက်စိအောက်က မြန်မြန် ထွက်သွားစမ်းကွာ” လို့ ပြောမိတယ်ဆိုရင်တော့ နှုတ်ဆက်ပုံနှုတ်ဆက်နည်း နေရာမကျဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
နှုတ်ဆက်စကားအကြောင်း ရေးရင်းနဲ့ ဟိုးတလောလေးဆီက (ယူကျု ဗီဒီယို တခုမှာ ထင်တယ်။) မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက် ပြောထားတာကို သွားသတိရမိတယ်။ (လင့်ခ်ကို အတိအကျ မမှတ်မိတဲ့အတွက် စကားလုံးအတိအကျမဟုတ်ဘဲ သဘောလောက်ကိုပဲ ပြန်ရေးပြနိုင်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့။)
“အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံအသီးသီးမှာ လူမျိုးအလိုက် နှုတ်ဆက်စကားတွေရှိကြပေမယ့် မြန်မာတွေရဲ့ နှုတ်ဆက်ပုံကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးခြား (Unique) တယ်ပေါ့နော်။ သူများ နှုတ်ဆက်စကားတွေဆိုရင် မနက်ခင်းဆိုရင် နှုတ်ဆက်ပုံတမျိုး၊ နေ့လည်ဆို နှုတ်ဆက်ပုံတမျိုး၊ ညပိုင်းဆိုရင် နှုတ်ဆက်ပုံတမျိုး အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပေမယ့် မြန်မာနှုတ်ဆက်စကားကတော့ ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမဆို “မင်္ဂလာပါ”လို့ တမျိုးတည်း နှုတ်ဆက်လို့ရတာ ထူးခြားပါတယ်”.......... ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ကြံကြံဖန်ဖန် အမွှန်းတင် ပြောသွားတာကို နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အချင်းချင်းတွေ့ကြရင် “နေကောင်းလား”၊ “မတွေ့တာကြာပြီနော်”၊ “စားပြီးပြီလား”၊ “ဘယ်သွားမလို့လဲ” စသဖြင့် ဒီလိုစကားတွေနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်တတ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကို ဆရာဝင်လာတဲ့အချိန် နှုတ်ဆက်တတ်ကြတာကလွဲလို့ အပြင်မှာ အချင်းချင်း တွေ့ကြတဲ့အခါ “မင်္ဂလာပါ” လို့ နှုတ်ဆက်ခဲပါတယ်။ (အဲ.... ချွင်းချက်အနေနဲ့ စင်္ကာပူက ဓါတ်ပုံဆရာ၊ ဘလော့ဂါ ဂျစ်တူး(မုံရွာ)ကတော့ အပြင်မှာ တွေ့ရင်လည်း “မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ” ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တတ်တာကို သတိပြုမိပါတယ်။)
သည်တော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ယူကျုဗီဒီယိုထဲက အမျိုးသမီးပြောသွားတာ သိပ်ပြီး ယုတ္တိမတန်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး “မင်္ဂလာပါ”ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားဟာ ကျနော်တို့မြန်မာစကားမှာ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိတဲ့အတွက် (ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်လေသလားမသိ) ကောက်ခါငင်ခါ တီထွင်လိုက်ပြီးမှ လူသုံးသိပ်မများလှတဲ့ ဝေါဟာရတခုလို ဖြစ်နေသလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။
ဆက်တွေးမယ်ဆိုရင် “မင်္ဂလာပါ” ဆိုတဲ့ စကားကိုယ်၌က ပါဠိဘာသာကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံး ဖြစ်နေပြန်တယ်။ မြန်မာစကားမှာ မော်တော်ကား၊ ဒါရိုက်တာ စသဖြင့် အခြားဘာသာစကားကနေ တိုက်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဝေါဟာရ၊ မွေးစားထားတဲ့ ဝေါဟာရတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် မဟုတ်ဘူး။ အခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်း ဒီလို မွေးစားဝေါဟာရတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ “တာ့တာ” ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း မူလဇစ်မြစ်က မြန်မာဘာသာစကားမဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာတွေကြားမှာ အသုံးတွင်ကျယ်လာတဲ့အခါ မြန်မာဝေါဟာရအနေနဲ့ပဲ မသတ်မှတ်သင့်ဘူးလား၊ လက်မခံသင့်ဘူးလား ဆိုတာ တွေးတောစရာဖြစ်လာပါတယ်။
ဘာသာစကားဟာလည်း ယဉ်ကျေးမှုတွေလိုပဲ ခေတ်အလိုက် အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ပုဂံခေတ်က ဝေါဟာရတွေ ဒီခေတ်မှာ မတွင်ကျယ်တော့သလို၊ ကျနော်တို့ခေတ်က ဝေါဟာရတွေကလည်း နောက်ပိုင်းကျရင် ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်တာပဲ။ ခေတ်တခေတ်ရဲ့ တွင်ကျယ်နေတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ခေတ်မစားတော့တဲ့ ခေတ်ဟောင်းက အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ လိုက်လံနှိုင်းယှဉ်ပြီး အစားထိုး သုံးစွဲစေချင်လို့ ဖြစ်လာနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ရှိသမျှ မြန်မာဝေါဟာရကို ထိန်းသိမ်းနေမယ့်အစား အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလိုက်ရင် ဝေါဟာရ ပိုမိုကြွယ်ဝတဲ့ ဘာသာစကားတခုတောင်မှ ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ တွေးတောမိပါတယ်။
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။............။ ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ ။ ရေးသူ- လူထုဒေါ်အမာ (မှတ်ချက်။ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဒီအညွှန်းလင့်ခ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်း ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ။)
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, October 13, 2010
Labels: general Comments: (62)
Labels: သမီး Comments: (18)
၂၀၀၈ တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ကို မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာဆိုတာထက် စကားထာ ဝှက်တာဆိုရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ ကဲ..... ပဟေဠိကို အဖြေညှိသွားကြပါဦး။
ဟာဗျာ။ ကြံကြံဖန်ဖန်၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ။ ခင်ဗျားတို့တော့ အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြုလုပ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ်တထောင် ကျတော့မှာဘဲ။
တကယ့်အဖြေမှန်က နှစ်စဉ် ကပြနေကျ “ကျောက်ဆည်ဆင်”။ မယုံရင် ဟောသည်မှာ သွားကြည့်ပေါ့။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကဗျာကတော့ မူရင်းပို့စ်မှာ ဝင်ရေးလုပ်သွားတဲ့ ဘလော့ဂါကိုမောင်ရင်ရဲ့ ကွန်မင့်ပါ။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, September 23, 2010
Labels: Poem Comments: (46)
ဒင်းကို အမှုန့်ကြိတ် ပစ်ချင်တယ်။
“သန်း” ဆိုတဲ့ ကပ်ပါးကောင်ပေါ့။
(၂၂ - ၉ -၂၀၁၀)
စာကိုး။..........။ သန်း = Louse
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, September 22, 2010
Labels: Poem Comments: (28)
(မှတ်ချက်။........။ နေရာလွဲပြီး အသုံးချပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆက်အပေါ် တာဝန်မယူ။)
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, September 21, 2010
Labels: Poem Comments: (20)
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 20, 2010
Labels: Poem Comments: (11)
(၂၀၊ ၉၊ ၂၀၁၀)
“အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ” အမည်ရသည့် သမိုင်းလိမ်ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော အနုပညာရှင်များ ပြည်ပသို့ လာရောက်ဖျော်ဖြေသောအခါ ပြည်ပရောက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြကြသည့် သတင်းများ၊ အီးမေးလ်များ၊ ဓါတ်ပုံများကို ခုတလော နေ့စဉ်လိုလို ဖတ်နေရသည်။ မြင်နေရသည်။ ကြားနေရသည်။
ဤကိစ္စအပေါ်တွင် မတူညီကွဲပြားသည့် အမြင်များ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေသည်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားစွာ သတိပြုမိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ သဘောထားကို ပြောရလျှင် ထိုကဲ့သို့သော ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားတွင် အနုပညာရှင်များ ပါဝင်ခြင်းကို မနှစ်သက်ပါ။ ထိုသူတို့သည် နအဖ၏ ဖိအားပေးမှုကို လက်မခံနိုင်၍ နအဖအလိုကျ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသည်ဟု ဆင်ခြေပေးစေဦး၊ သူတို့သည် အဂတိတရားလေးပါးတွင် ဘယာဂတိ ဟူသော ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် မမှန်ကန်သည့်ဖက်မှ ဘက်လိုက်ခြင်းအမှုကို ပြုမူခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အခွင့်အရေးလာဘ်လာဘအတွက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက ဆန္ဒာဂတိတည်းဟူသော အဂတိတရားကိုပါ ချိုးဖောက်ခြင်း မည်ပေသည်။ သမိုင်းကြောင်းကို သေချာမသိ၍ သဘောရိုးဖြင့် ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်သည်ဆိုလျှင်လည်း မောဟဂတိကြောင့် ဘက်လိုက်ခြင်းအမှုကို ပြုခဲ့ရာရောက်လေသည်။
သို့သော် ထိုသူများအား ပြည်ပရောက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဆန္ဒပြကြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ကား ကျွန်ုပ်တွင် အတွေးပွားစရာ များစွာရှိပါသည်။ မရှင်းလင်းသည်များ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိလာပါသည်။
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် စဉ်းစားရန်ရှိသည်မှာ ဘယ်လို အနုပညာရှင်မျိုးတွေကို ဆန္ဒပြကြမှာလဲဆိုသည့် မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ချက် (criteria) ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ ဝါဒဖြန့်ချီရေးယန္တရားတွင် ပါဝင်သူတိုင်းကိုသာ ဆန္ဒပြရလျှင် တင်သန်းဦးရိုက်ကူးသော “လှလေးစိန်” ဇာတ်ကားတွင် “လှလေးစိန်” အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူပင် ပြေးလို့ လွတ်မည်မဟုတ်။
အလားတူပင် ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမှ အယ်ဒီတာ ဦးဝင်းငြိမ်းကြီး အမေရိကားသို့ လာရောက်သောအခါ ဝိုင်းဝန်းဆန္ဒပြရမလိုဖြစ်နေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းအပါအဝင် လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတိုင်းလိုလိုတွင် ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာ၌ နအဖ၏ ဝါဒဖြန့် ဆောင်ပုဒ်များ၊ ကြွေးကြော်သံများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြကြရသောကြောင့်ပင်တည်း။ ရွှေအမြုတေပရိသတ်လည်း ဝိုင်းစု ပရိသတ်ထက် သေးမည်မထင်ပါ။
ထိုမှတဖန် ထပ်၍ စဉ်းစားပြန်သော် နအဖ ကမကထလုပ်သော ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် သီဆိုဖျော်ဖြေခြင်း မပြုဖူးသည့် အဆိုတော်များလည်း မရှိသလောက် ရှားလှပေသည်။ ထိုအဆိုတော်များ ပြည်ပထွက်လာလျှင်လည်း ဆန္ဒပြကြမည်လော။ ထို့အတူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအလည်အပတ်မလာခင် လမ်းများကောင်းမွန်နေစေရေးအတွက် နအဖ၏ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခံရသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို စစ်ဆင်ရာတွင် အသုံးချရန် ပေါ်တာအဆွဲခံရသူများအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြမည်လော။
ဤသည်ကား မည်သည့်အနုပညာရှင်များအား ဆန္ဒပြသင့်သနည်းဟု စဉ်းစားလိုက်သောအခါ အတွေးထဲတွင် ရှေးဦးစွာ ထွက်ပေါ်လာသည့် အချက်များဖြစ်သည်။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ နအဖ ခိုင်းစေသမျှ ခံကြရသူတွေထဲတွင်မှ သူမ တယောက်တည်း ကံကွက်ကျား၍ ဆန္ဒအပြခံရခြင်းမှာ အတော်ပင် ကံဇာတာ နိမ့်ပါးနေ၍ ဖြစ်ရချေမည်ဟု တွေးတောနေမည်လား မပြောတတ်။ (သူမတယောက်တည်းတော့ မဟုတ်။ ထိုဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သူအားလုံးဟု ပြောရချေမည်။)
မည်သူများအား ဆန္ဒပြသင့်သနည်းဆိုသည့် မေးခွန်း၏ နောက်တွင် ဒုတိယ ကပ်လိုက်လာသည့်မေးခွန်းမှာ မည်သူတွေက ဆန္ဒပြသင့်သနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။
လူအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စများတွင် ကိုယ့်သဘောထားကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။ ဆန္ဒပြခွင့်ရှိသည်။ ဤအချက်ကို အားပေးသည်။ လက်ခံသည်။ ယုံကြည်သည်။ သို့သော် မေးခွန်းမှာ “ဆန္ဒပြသင့်သလော၊ မပြသင့်သလော” ဟူ၍ မဟုတ်ဘဲ “မည်သူတွေက ဆန္ဒပြသင့်သနည်း” ဆိုသည့် မေးခွန်းသာဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်းကို မေးရခြင်းမှာ အကြောင်းရှိသည်။ ပြည်ပ၌ လာရောက်နေထိုင်သူများတွင် နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဒုက္ခသည်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ စသဖြင့် လူမျိုးစုံပါဝင်သည်။ ယေဘုယျ ခြုံငုံပြောရလျှင် ထိုသူအားလုံးသည် ပြည်တွင်းမှ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆက်လက် ခါးစည်းမခံနိုင်သဖြင့်၊ နအဖ၏ ဖိနှိပ်မှုကို ဆက်လက်မခံစားနိုင်တော့သဖြင့် လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ထွက်ပြေးလာကြသူချည်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်နွယ်ဖူးသူများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဒုက္ခသည်များမှာ နအဖ၏ နှိပ်ကွပ်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့၍ ထွက်ပြေးလာကြသူများဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် တတိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံသွားကြသော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ထိုသူများအနေဖြင့် မြန်မာ့အရေးကိစ္စများတွင် ဆက်လက်၍ စိတ်ဝင်စား ရှင်သန်နေခြင်း၊ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအားပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်အားထုတ်နေခြင်းများအား အားပေးထောက်ခံပါ၏။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ပြည်ပအကူအညီများကို ရယူ၍ ပြည်တွင်းသို့ ပံ့ပိုးရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းများအတွက်လည်း ချီးကျူးပါ၏။ အားပေးထောက်ခံပါ၏။
သို့သော် အနုပညာရှင်များကို ဆန္ဒပြသည့် ကိစ္စတွင်မူ စဉ်းစားစရာတချက်ရှိနေသည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖိနှိပ်မှုကို မခံနိုင်၍ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာပြီးမှ ပြည်တွင်းတွင် ကျန်ရစ်နေသေးသည့် အနုပညာရှင်များကို နအဖအား အာမခံရဲရကောင်းလားဟု အပြစ်တင်နေသည်မှာ နည်းလမ်းမကျဟု မြင်မိပါသည်။ ဥပမာပေးရသော် “အငှားဗိုက်နှင့် ဓားထိုးခံကြည့်ချင်သူများ” သဖွယ် ဖြစ်နေချေသည်။ တဖန် “ကုလားမနိုင်၍ ရခိုင်မဲ” ရာလည်း ရောက်နေသည်။ ပစ်မှတ်လွဲနေသည်ဟု တွေးမိပါသည်။ အကယ်၍ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့အား ဆန္ဒပြသူများသည် ပြည်ပရောက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းမှ ပရိသတ်၊ ပြည်တွင်းမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ခဲ့သော် ယခုကဲ့သို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းကလူများ လုပ်နေသည်ကို အားမလိုအားမရသူများရှိသော် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်၍ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်ကြရန်သာရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သည့်အရာကို သူတပါးအား လုပ်စေချင်နေခြင်းမှာ သိပ်တော့ နည်းလမ်းမကျ။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာ…. ဤသို့သော ပေါ်လစီဇာတ်ကားမျိုး၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခြင်းကဲ့သို့ ကြီးလေးသည့် ပြစ်မှုမြောက်ပါရဲ့လော ဟူသည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ပြည်ပသို့လာသည့်အခါ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းကို နားလည်လက်ခံ၍ ရသည်။ ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ နအဖနှင့် အလိုတူအလိုပါ ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများ ပြည်ပသို့ လာရောက်ခွင့်ဗီဇာကို ပိတ်ပင်ခြင်းအားလည်း နားလည်ထောက်ခံနိုင်ပါသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုစီးပွားရေးသမားများမှာ နအဖနှင့်ပေါင်းကာ ပြည်သူလူထုကို ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်နေသူများ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သို့သော် စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသော အနုပညာရှင်များကို ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူများက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းသည် တရားမျှတပါရဲ့လော စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ ဝါဒဖြန့် ပေါ်လစီကားများတွင် သရုပ်ဆောင်ခြင်းကို စစ်အစိုးရလက်ပါးစေဟု သတ်မှတ်သင့်၊ မသတ်မှတ်သင့်ဆိုသည်ကို ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးပြကျွမ်းကျင်သူများ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
မလွတ်လပ်သော နိုင်ငံများတွင် စစ်ကြောရေး၊ သို့မဟုတ် ရဲလက်တွင် နှိပ်စက်မှုကို မခံနိုင်တော့၍ မိမိမကျူးလွန်ခဲ့သော အမှုကို ကျူးလွန်ပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးသူများစွာရှိသည်။ ထိုရဲစစ်ချက်တခုတည်းအပေါ် မူတည်ပြီး ထိုသူအား ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်လိုက်လျှင် အပြစ်စီရင်ခံရသူအနေဖြင့် နစ်နာပေသည်။ အလားတူပင် မလွတ်လပ်သော အခြေအနေတခု၌ မိမိဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်ကာ ဖိအားပေးသဖြင့် လုပ်ဆောင်လိုက်ရသော အလုပ်တခုအတွက် မည်သို့ အရေးယူမည်နည်း။ အထူးသဖြင့် ထိုအမှုသည် ရာဇဝတ်မှုမမြောက်သည့်ကိစ္စဆိုလျှင် မည်သို့တုန့်ပြန်ကြမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်သဘောအရမူ ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားများနှင့်ပတ်သက်၍ နအဖက ဝါဒဖြန့်လျှင် မိမိတို့ကလည်း တုန့်ပြန်၍ အမှန်တရားကို ပြန်လည် ဖြန့်ဝေကြမည်။ နအဖမှာ လက်ရှိအာဏာကို ကိုင်စွဲထားသူများဖြစ်၍ ဝါဒဖြန့်ချီရေးယန္တရားတွင် တပန်းသာသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် မိမိတို့က တပန်းသာသည်မှာ လူထုက စစ်အစိုးရကို မယုံကြည်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအနေနှင့် သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး မုသားများကို တုန့်ပြန်ချေပကြမည်ဆိုလျှင် မိမိတို့က အသာစီးရနိုင်သည်။ ဤသို့ချေပရာတွင် အနုပညာရှင်များအား ပြည်ပမှနေ၍ ဆန္ဒပြခြင်းထက် လူထုကို စည်းရုံး၍ လူထုအင်အားသုံးကာ အမှန်တရားကို ဖြန့်ဖြူးမည်ဆိုလျှင် ပိုမိုထိရောက်မည်ထင်သည်။ မိမိက ပြည်ပရောက်နေလျှင်လည်း ပြည်တွင်းမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ ထိရောက်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကူညီသင့်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် စစ်အစိုးရ၏ ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားများကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဟု မြင်မိပါသည်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, September 19, 2010
Labels: in the news Comments: (86)
မြန်မာဘလော့ဂ်ကွန်မင့်ကဏ္ဍများတွင် “မှတ်သားသွားပါတယ်။ နာယူသွားပါတယ်” စသည့် ကွန်မင့်များကို အတည်ပေါက်ကြီးရေးနေသူတွေ အတော်များသည်။ ထိုသူများ ပြောသည့်အတိုင်းသာ အမှန်တကယ် မှတ်သားနာယူသွားသည်မှန်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပညာယှိကြီးများ ပြည့်နှက်နေသော နိုင်ငံတနိုင်ငံသာဖြစ်ချိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မူကား ၄င်းတို့ “ဖောရှော” လုပ်နေသည်ဟုသာ ထင်မိသည်။ ထို့သို့ ဖောရှောလုပ်သောသူများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ဖောရွှေတို့၏ နိုင်ငံတော်ကြီးသည် သာယာပါရဲ့လားဟု ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်သော်....
Posted by ကိုပေါ on Saturday, September 18, 2010
Labels: general Comments: (14)
(ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးသော ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ၏ “လူကြီးလူကောင်း” ကာတွန်းဇာတ်လမ်းအား ဇာတ်ကောင်များအစားထိုး၍ မှတ်မိသလောက် ဘလော့ပိုစ့်အနေနှင့် ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားပါသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွင် ပါသော လူများ၊ နေရာများမှာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲ စာရေးသူ၏ စိတ်ကူးထဲတွင် ဖန်တီးထားသော ဇာတ်ကောင်များ၊ နေရာများသာဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိက ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်။)
တနေ့သ၌ တပ်ချုပ်ကြီးသည် ဂြိုဟ်တုမှ ထုတ်လွှင့်သော ဘောလုံးပွဲကြည့်နေရင်း သူအားပေးသောအသင်းက ဂိုးသွင်းလိုက်သဖြင့် ထိုင်ရာမှ ထ၍ လက်ပမ်းပေါက်ခတ်ရာ သက်တော်ကြီးရင့်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဘွတ်ကနဲ လေလည်မိသွားလေသည်။
ဘေးတွင် ဘောလုံးပွဲအတူ ထိုင်ကြည့်နေသော သူရရွှေပန်း၊ သာအေး၊ သာဂိ စသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထံမှ ရယ်သံများ ထွက်လာလေသည်။
တပ်ချုပ်ကြီးက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး…. “မင်းတို့က ဘာရီတာလဲကွ” ဟု မေးလိုက်၏။(မှတ်ချက်။……..။ဤနေရာတွင် ဘာရယ်တာလဲ ဟု ဖတ်ပါရန်။ တော်ကြာ ဘလော့ဂါ ရီတာကို မေးသည်ဟု ထင်မှတ်မှားမည် စိုးသဖြင့်)
သူရရွှေပန်း (ကပျာကယာဖြင့်)။.........။ ဟို..ဟို... ရယ်တာမဟုတ်ပါဘူး... အဘ။ ဝမ်းထဲက ကျလိကျလိ ဖြစ်လာလို့ ပါးစပ်ကနေ အဟိအဟိ မြည်သွားတာပါ။
တပ်ချုပ်ကြီး။……..။ အေး…. မင်းတို့ ရူးကြောင်မူးကြောင် လုပ်မနေကြနဲ့။ ကြပ်ပြေးတောင်ခြေမှာ စပိုက်ဒါမင်း အဝတ်အစားနဲ့ လူဆိုးတယောက် သောင်းကျန်းနေတယ်ကြားတယ်။ အဲဒါ မင်းတို့ နောက်တနေ့ညနေ သွားပြီး လက်ရဖမ်းချေကြ။
ဘောလုံးပွဲပြီး၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အပြင်သို့ ထွက်လာကြသောအခါ အချင်းချင်း ဤသို့ တီးတိုးတိုင်ပင်ကြလေသည်။
“အဘတော့ ငါတို့ရယ်လိုက်တာနဲ့ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး အလောင်းစည်သူမင်းကြီး အထာချိုးနေပြီ။ မနက်ဖြန်ကျရင် သူကိုယ်တိုင် စပိုက်ဒါမင်းအဝတ်အစားဝတ်ပြီး ရုပ်ဖျက်လာလိမ့်မယ်။ ဖိုက်တင်ပလေးကြရင် တကယ် မလုပ်နဲ့။ သူစိတ်ကျေနပ်အောင် မင်းတို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ဖိုက်ပြီး လှဲချပြလိုက်…ကြားလား”
ဤသို့ဖြင့် နောက်တနေ့ နေဝင် တယောကိုတင်ရီ အချိန်တွင်…အဲ… နေဝင်ရီတရောအချိန်တွင် ရွှေပန်း၊ သာအေး၊ သာဂိ စသည့် အမိုက်တကာ့ဗိုလ်မင်း၊ အဖျဉ်းတကာ့ဗိုလ်ချုပ်၊ အပယ်လေးလီ မြစ်နဒီတွင် ပလုံစီအောင် ငုပ်မည့် လူရှုပ်ကြီးများသည် ဒဂုံဂျစ်၊ မြန်မာဂျစ် စသည့် ခေတ်မီမော်တော်ကားကြီးများ ကိုယ်စီဖြင့် ကြပ်ပြေးတောင်ခြေတွင် ပုန်းအောင်း၍ အသင့်စောင့်နေကြလေသည်။
အီးတညှစ်မျှ ကြာသောအခါတွင် (စစ်ရေးပြအခမ်းအနားများတွင် သုံးသော) အမိုးဖွင့် ကားနက်ကြီးကို စီးလျက် စပိုက်ဒါမင်း အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ထားသော တပ်ချုပ်ကြီး ပေါက်ချလာလေသည်။
သာအေး၊ သာဂိ၊ ရွှေပန်းတို့လည်း ပုန်းအောင်းနေရာက အသီးသီးထွက်ကြပြီး စပိုက်ဒါမင်းကို ဖမ်းရန် ကြိုးစားကြလေသည်။ စပိုက်ဒါမင်းလည်း အမိုးဖွင့်ကားကို ကပ်တုံ၊ ခွာတုံ၊ ရပ်တုံ၊ ဘက်ဂီယာထိုးတုံ အမျိုးစုံဖြင့် မရိုးရအောင် ကားရေးပြလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကားပေါ်မှ အသီးသီးဆင်းလာကြပြီး မြေပြင်ပေါ်တွင် (ကြက်ဖခွပ်သလို) ဖိုက်တင်ပလေး ကြလေသည်။ သာအေးတို့လည်း တင်ကြိုတိုင်ပင်ထားသည့်အတိုင်း အယောင်ပြသာ ဖိုက်ကြပြီး စပိုက်ဒါမင်းက လက်သီးထိုးလိုက်သည့်အခါ မထိမီကပင် “အားကနဲ” “အီးကနဲ” အော်ဟစ်ငြီးတွားကာ အသီးသီး ပစ်လှဲပြကြလေသည်။ နှပ်တညှစ်ခွဲခန့်အတွင်းမှာပင် သာအေးတို့လူစု မြေပေါ်သို့ အတုံးအရုံး လဲကျ ကုန်တော့သတည်း။
ထိုအခါမှ စပိုက်ဒါမင်းလည်း ကားနက်ကြီးပေါ်သို့ ပြန်တက်သွားပြီး… “ဝူးထွားဟားဟား။ စပိုက်ဒါမင်းတဲ့ဟေ့…တမင်းပဲရှိတယ်။ နှစ်မင်းရှိရင် စင်ပြိုင်အစိုးရတောင် ပြည်တွင်းမှာ မနေနိုင်ဘူး။ ထွက်ပြေးရတယ်။” ဟု အသံနက်ကြီးဖြင့် ရယ်မောလျက် မိုင်ကုန်မောင်းကာ ထွက်ခွာသွားလေသည်။
စပိုက်ဒါမင်းမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားသော် သာအေးတို့လူစုလည်း မြေကြီးပေါ်က အသီးသီးထပြီး အူနှိပ်ကာ ရယ်မောကျန်ရစ်ခဲ့ကြလေသည်။
“ဟားဟားဟား။ တပ်ချုပ်ကြီးတော့ ငါတို့ရဲ့ အကယ်ဒမီရှော့တ်တွေကို တကယ် အဟုတ်ထင်ပြီး စိတ်ကြီးဝင်သွားပြီ။ ဧကန္တ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးလည်း ငါတို့လို အကယ်ဒမီအဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့သွားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်…ဟားဟား”
နောက်တနေ့ လေးလပတ် အစည်းအဝေးသို့ ရောက်သောအခါ သူရရွှေပန်းတို့ လူစုအား တပ်ချုပ်ကြီးက မေးလေသည်။
“ဘယ့်နှယ့်လဲကွ။ မင်းတို့ လူဆိုးကို ဖမ်းမိခဲ့ရဲ့လား”
သူရရွှေပန်းတို့လည်း ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားသည့်အတိုင်း….. “မှန်ပါ။ ဤလူဆိုးသည် လူမက နတ်တမျှ စွမ်းလှကြောင်းပါ။ ကျနော်တို့မှာ အနားမျှပင် မကပ်နိုင်ဘဲ နောက်ဆုံး အလဲလဲ အကွဲကွဲဖြင့် ရှုံးနိမ့်ပြီး ပြန်ခဲ့ရပါသည်” ဟု လျှောက်ထားကြလေသည်။
ဤအခါတွင်မှ တပ်ချုပ်ကြီးလည်း…. “အိမ်း….. နင်တို့ ငါ့ကို အိုပြီ ထင်ကြသည်။ ငါမအိုသေး။ တပ်ထဲမှာ မဲဖောက်ပေးမယ့် မုဆိုးမ ရှိသေးရင် နောက်ထပ် ဆယ်ယောက်လောက် ထပ်ပြီး ယူပြနိုင်သေးတယ်….အဟေးဟေး”
ရွှေပန်း၊ သာအေး၊ သာဂိ စသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလည်း ပြင်းစွာ ကြောက်လန့် ခန့်ညားရိုသေကြလေသည်။ (တကယ်မလန့်လည်း လန့်သည့်သဏ္ဍာန် အကယ်ဒမီ အိုက်တင်များကို ပေးကြလေသည်။)
ထိုအခိုက် သာအေး၏ နဖူးကို လောက်စာလုံးတလုံး အရှိန်ပြင်းစွာ လာမှန်လေသည်။
“ဟေ့ ဘယ်ကောင်လဲကွ။ လေးလပတ်အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့နေရာမှာ လေးဂွ လာသရမ်းတာ”
အသံကြား၍ အားလုံး လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ အစည်းအဝေးခန်းမ အဝင်ဝတွင် လေးဂွကို လက်တဖက်က ကိုင်စွဲလျက် ရပ်နေသော မြေးတော် မျောက်လောင်းကလေး ဖိုးလောက်လန်း ကို တွေ့လိုက်ကြရသည်။
တပ်ချုပ်ကြီး။………..။ မြေးတော်လေး။ ဘာကြောင့် လေးဂွနဲ့ ပစ်ရသလဲ။
ဖိုးလောက်လန်း။……….။ မှန်လှပါ ဖိုးဖိုး။ ဒီလူတွေ ဖိုးဖိုးကွယ်ရာမှာ အတင်းတုပ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ အကယ်ဒမီအိုက်တင်နဲ့ ပတ်ချလိုက်တာ ဖိုးဖိုးတော့ ခံလိုက်ရပြီတဲ့။ နောက်ပြီး ပြောသေးတယ်။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးလည်း သူတို့လို အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တွေ့သွားတာလို့ ပြောပြီး ဟားနေကြတယ်။
ဤမှာပင် တပ်ချုပ်ကြီးလည်း သူ့လူများ၏ မရိုးသားပုံကို ရိပ်မိသွားပြီး….
“မင်းတို့ ဒီလောက်တောင် အကယ်ဒမီ အိုင်တင်ပေးချင်တဲ့ကောင်တွေ၊ အရပ်ဝတ်ပြောင်းပြီး သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတက်ပေတော့” ဟုဆိုကာ ရွှေပန်း၊ သာအေး၊ သာဂိတို့အား စစ်ဖက်ရာထူးအသီးသီးမှ အနားပေးလိုက်လေသတည်း။
ဒီကနေ့ တနေ့တည်း တင်ဖြစ်တဲ့ ရှေ့က တပို့စ်ကို ဖတ်ရန်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, September 11, 2010